Showing posts sorted by relevance for query ရန်ကုန်. Sort by date Show all posts
အမြန်လမ်းတွင် သေဆုံးမှုစံချိန်တင်ခဲ့သည့် ရာဇာမင်း ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ရာဇာမင်းယာဉ်လိုင်း တာဝန်ရှိသူတို့ တွေ့ဆုံ
5/14/2014 01:32:00 PM accident
ရာဇာမင်းယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရုံး၌ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကို၊ နေပြည်တော် မထသ (အဝေးပြေး) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဆွေ၊ အမြန်လမ်းလုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးနေ၀င်းနှင့် ရာဇာမင်းယာဉ်လိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများသည် မေ ၁၃ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားသူ ၁၄ ဦးအား တစ်ဦးလျှင် ရာဇာမင်းယာဉ်လိုင်းမှ
ရေဝေးသုဿ န်သမိုင်ကို ရိုက်ချိုးခဲ့သော ပြည်သူ့ဈာပနပွဲ-ကျော်သူ
4/24/2014 11:37:00 PM articles
၂၁.၄.၂ဝ၁၄ ရက်နေ့ နံနက် (၆း၃ဝ) နာရီအချိန်တွင် သံမဏိစိတ်ဓါတ်နှင့်လူသား ဟု တင်စား ခေါ်ဝေါ်နေကြသော ဟံသာဝတီ ဘဘ ဦးဝင်းတင် ၏ ဈာပနအခမ်းအနား အစီအစဉ်ပြုလုပ်ရန် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အဆောင် ၅/၆ တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယက ဘဘဦးတင်ဦးမှ ဦး ဆောင်၍ အစည်းအဝေးတစ်ရပ် ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဘဘဦးဝင်းတင်၏ ရုပ်ခန္ဓာအား ရေဝေးသုသာန်သို့ သယ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင် ကျွန်တော်သည် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြက်ကြီးအား ဦးခိုက်ပြီး ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့တွင် စက္ကန့်ပိုင်းမျှ ရပ်နား၍ ရေဝေးသုသာန် အအေးခန်းသို့ နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ကြီးဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ရေဝေးသုသာန်တွင် သင်္ဂြိုဟ်မည့် အစီအစဉ်နှင့် ဂူသွင်းမည့်နေရာအား ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ခ) ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့နှင့် ကာယကံရှင် မိသားစုတို့မှ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)မှ အသင်းသား/သူများတို့သည် အသင်းရုံးချုပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ အသင်းရုံး ချုပ်သို့ရောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း ဘဘ ဦးဝင်းတင် ၏ ဈာပနတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်၊ Cool Box ၊ အုတ်ဂူမြေနေရာကိစ္စရပ်များအား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဘဘ၏ ရုပ်ခန္ဓာအား ထည့်သွင်းနိုင်ရန် အခေါင်းသေတ္တာများအား မိသားစုဝင် များတို့မှ ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ရာတွင် ဘဘ၏ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား၊ အတိုင်းအထွာအရ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်စေကာ တိုင်းထွာပြခဲ့ပြီး ရိုးရှင်းမှုသာနှစ်သက်သည့် ဘဘအတွက် သာမန်ကျွန်း အခေါင်းသာ ရွေးချယ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ယနေ့ ၂၃.၄.၂ဝ၁၄ ရက်နေ့ နံနက် (၇းဝဝ) နာရီအချိန်မှစ၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ စီစဉ်ထားသော ဘဘ ဦးဝင်းတင် အား လွမ်းဆွတ်အောင့်မေ့ခြင်း၊ လွမ်းသူ့ပန်းခြင်းများအား ပြည်လမ်းရှိ ယုဒသာန်ခန်းမသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ ဂရပ်ဖတီ အာကာကျော် တစ်ညအတွင်းအပြီး ရေးဆွဲထားသော ဘဘဦးဝင်းတင်၏ ပန်းချီကားအား ယုဒသာန်ခန်းမသို့ ပို့ ဆောင်ခြင်း၊ ဘဘ၏ ရုပ်ခန္ဓာအားသယ်ဆောင်မည့် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်တွင်လည်း ဘဘ၏ ပန်းချီကားချိတ် ဆွဲခြင်း၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ဝင် များမှ ဈာပနအခမ်း အနားသို့ တက်ရောက်လာမည့် ကျောင်းသားလူငယ်၊ ပြည်သူလူထုတိ်ု့အတွက် အရေးပေါ် ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန် လူနာတင်ယာဉ်နှစ်စီးဖြင့် ရေဝေးသုသာန်တွင် တာဝန်ချစေလွှတ်ထားခြင်း၊ ရွှေစင်စကြာင်္ ခရီးသွားမော်တော်ယာဉ်လိုင်းမိသားစုမှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီ လှူဒါန်းသော 600 ML ကျော် လွှားသောက်ရေသန့်ဘူး (၃ဝဝဝ) အား ဘဘ ဦးဝင်းတင် ၏ ဈာပနသို့ လိုက်ပါပို့ဆောင်သူများအား ဝေငှပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် နေ့လည် (၂းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) ရုံးချုပ်မှ ရေဝေးသုသာန်သို့ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ကြီး မောင်းနှင်ခဲ့တော့သည်။
ဈာပနပို့ဆောင်လာကြသော ကြက်ပျံမကျများပြားလှသည့် မိဘပြည်သူလူထုနှင့် မော်တော် ယာဉ်များပိတ်ဆို့နေသည့် လမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ ဖြည်းညှင်းစွာ မောင်းနှင်လာခဲ့ရာ ရေဝေးသုသာန် ခန်းမ (၁/က) အရောက်တွင် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ကြီးသည် စက်သေ၍ ထိုးရပ်သွားခဲ့ပြီး ဆက်လက်မောင်း နှင်၍ မရချေ။ စက်ပြင်များခေါ်ယူ၍ ပြင်ဆင်သော်လည်း မော်တော်ယာဉ်ကြီးမှာ မည်သို့မျှ ပြန်လည် စက်နှိုး၍ မရချေ။ ထိုအချိန်သည်ကား နေ့လည် (၃းဝဝ) နာရီအချိန်ဖြစ်နေပေပြီ။ ဘဘ၏ ရုပ်ခန္ဓာအား ဂူသွင်းမည့် အုပ်ဂူသို့ ပို့ဆောင်ရမည့်အချိန်မှာ ညနေ (၅းဝဝ) နာရီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ချက်ချင်းပင် နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်တစီးအား ထပ်မံစေလွှတ်၍ ဘဘဦးဝင်းတင်၏ ရုပ် ခန္ဓာအား အချိန်မှီမော်တော်ယာဉ်၍ ဂူသွင်းမည့်နေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ရေဝေးသုသာန်၌ ပူပြင်းလှသော ရာသီဥတုကြောင့် မူးမေ့သွားသော အမျိုးသမီးလူနာနှစ်ဦးအား အရေးပေါ်လူနာတင် ယာဉ်ဖြင့် မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့သည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ဂါရဝပြုကြသည့် ကျောင်းသား လူငယ်၊ ပြည်သူလူထု၊ နိုင်ငံရေးနှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့များအား ဓါတ်ဆားဖျော်ရေများ ဖျော်၍ဝေငှပေးခဲ့ သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သော သာရေး/နာရေး အခမ်းအနားများ၊ တွေ့ဆုံပွဲများ၊ လူထု အစည်းအဝေးပွဲများတွင် မြန်မာပြည်သူလူထု အများစု သတိမထားမိသော အကျင့်ပါနေသော စွန့်ပစ် အမှိုက်များကိုလည်း နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက် မှဦးဆောင်၍ အမှိုက်များအား လိုက်လံကောက် သိမ်းပေးခြင်းတို့လည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုမျှစည်ကားလှသော တစ် ကြိမ်တစ်ခါမှ မတွေ့မကြုံဖူးသော၊ နိုင်ငံ့အကျိုးသယ်ပိုးသော၊ နိုင်ငံအပေါ်သစ္စာရှိရှိ ပြည်သူအကျိုးလို လားသော၊ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်သော၊ အကြောက်တရားမရှိသော သံမဏိစိတ်ဓါတ်လူသား ဟံသာဝတီ ဘဘ ဦးဝင်းတင်၏ နောက်ဆုံးဈာပန အခမ်းအနားကြီးတွင် နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူများ၊ လူကြီးများအား လုံးဝ(လုံးဝ) မတွေ့ရှိရခြင်းမှာ အင်မတန်မှ ထူးခြားနေလေသည်။ ထိုလူကြီးများ အမှန် တရားအား မချစ်မြတ်နိုး၍လား..?၊ အမှန်တရားချစ်မြတ်နိုးသူ၏ မျက်နှာအားမကြည့်ဝံ့၊ မမြင်ဝံ့၊ ရင် မဆိုင်ဝံ့၍လေလား..? တော့မသိပေ။ မော်တော်ယာဉ်တန်းများ၊ လူစုလူဝေးများအား စနစ်တကျ လိုက် ပါပို့ဆောင်နိုင်ကြရန် နှိုးဆော်ခြင်းအား ပြည်သူလူထုနှင့် ကျောင်းသားလူငယ်၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတို့မှ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် အသိစိတ်ဓါတ်တို့ဖြင့် ဦးဆောင်ပြုလုပ်သော အောင်မြင် စွာပြီးဆုံးခဲ့သော ဈာပနပွဲကြီးဖြစ်သည်။ ထိုဈာပနပွဲကြီးအပြီးတွင် ကျွန်တော် အတွေးတစ်ခုရလိုက် သည်။
သံမဏိစိတ်ဓါတ်သူသားကြီး ဟံသာဝတီ ဘဘဦးဝင်းတင် တစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ လူထု၊ ကျောင်းသားလူငယ်၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများအား စိတ်မချ၍များ ကျွန်တော်တို့၏ နိဗ္ဗာန် ယာဉ်ကြီး ရေဝေးသုသာန်မှ ဂူသွင်းရာနေရာသို့ မောင်းနှင်၍ မရခြင်းများလား၍ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန် တော်သည် ဘဘ ဦးဝင်တင် အား တိုင်တည်ကတိပေးလိုက်မိသည်။ “ဘဘ၏ ခိုင်မာပြတ်သားသော စိတ်ဓါတ်၊ တည်ကြည် သန့်ရှင်းသော ရဲသွေး၊ အမှန်တရားအား အကြောက်တရားမရှိ ရင်ဆိုင်နိုင်သော စိတ်ဓါတ်၊ အများအကျိုးအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဦးဆောင်နိုင်သော ခွန်အားတို့သည် ကျွန်တော် တို့နှင့်အတူ ကျောင်းသားလူငယ်၊ ပြည်သူလူထုတို့၏ အသွေးထဲအသားထဲစီးဝင် ရှင်သန်နေသည်ကို ဘဘ၏ ဈာပန အခမ်းအနား၍ သက်သေပြုသွားနိုင်သည်ဟုပင် ဖြစ်တော့သည်။
ရေဝေးသုဿန်သမိုင်းတွင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ဤမျှလောက်စည်ကားမှုကိုကား မမြင်မတွေ့မိ ချေ။ ထို့ကြောင့် ရေဝေးသုဿန်သမိုင်းအား ရိုက်ချိုးခဲ့သော ပြည်သူများ၏ ကြေကွဲစွာဖြင့် သူရဲကောင်း ၊ ပြည်သူများ၏ စံပြအာဇာနည်ကြီး၏ ပြည်သူ့ဈာပနပွဲဟူ၍ ဂုဏ်ပြုဦးညွှတ်လိုက်ရပါတော့သည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးကို လေးလမ်းသွားမှ ရှစ်လမ်းသွားအဖြစ် စတင်အကောင်အထည်ဖော်
6/04/2014 09:46:00 AM car-news Myanmar-news
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် ၉၄/၇ အနီးအား မေလအတွင်းက တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ-ဥာဏ်ဝင်းရှိန်)
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးကို လေးလမ်းသွားမှ ရှစ်လမ်းသွားလမ်းမကြီးအဖြစ် တိုးချဲ့သွားရန် စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ဇွန် ၃ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အမြန်လမ်းမကြီးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ရဲမှူးကြီးနေ၀င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
မေ ၁၂ရက်တွင် အဆိုပါအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်၌ ရာဇာမင်းခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးပြီးသည့်နောက်တွင် ရန်ကုန်- မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးအား လေးလမ်းသွားမှ ရှစ်လမ်းသွားအထိ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မည့် အစီအစဉ်အား အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အမြန်လမ်းမကြီးကို ရှစ်လမ်းသွားအဖြစ် ပြင်ဆင်သွားဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အချက်အလက်အကုန်လုံးကို သမ္မတကိုတင်ပြထားပါတယ်။ အခုအရင်ဆုံးအနေနဲ့ တံတားအပိုင်းတွေကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ အမြန်လမ်းမှာ လုံခြုံရေးနဲ့ စည်းကမ်းပိုင်းတွေကို ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားကိုလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားထက်ပိုပြီး တိုးချဲ့သွားပါမယ်” ဟု အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ အမြန်လမ်းမကြီးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ရဲမှူးကြီးနေ၀င်းက ဇွန် ၃ ရက်တွင်ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် လမ်းညွှန်သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကို မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှစ်မျိုးဖြင့် ထပ်မံတပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မေ ၁၂ရက် ည ၇နာရီခန့်က ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင် ၁၉၇/၆ အနီးရှိ ပျဉ်းမနား-တောင်တွင်းကြီး မီးရထားခုံးကျော်တံတားအောက်သို့ ရာဇာမင်းခရီးသည်တင်ယာဉ်မှာ ပြုတ်ကျခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည် ၁၆ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၂၈ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ယာဉ်တိမ်းမှောက်ပြီး လူသေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့သည့် ရာဇာမင်းခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး မော်တော်ယာဉ်အသင်း၏ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-ရန်ကုန် ခရီးစဉ်ပြေးဆွဲခွင့်ကို ပိတ်သိမ်းထားကြောင်း သိရသည်။
တစ်မိုင် ကျပ်သန်း ၂၅၀၀ အကုန်အကျ ခံခဲ့သော ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း စံချိန်စံညွှန်း မမီဟု အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ခံ
5/16/2014 10:40:00 AM car-news Myanmar-news
၃၆၇ မိုင် ရှည်လျားသော ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန္တလေး အမြန်လမ်းသည် တစ်မိုင်လျှင် ကျပ်သန်း ၂၅၀၀ အကုန်အကျခံ၍ ဖောက်လုပ်ထားသော်လည်း အမြန်လမ်း၏ စံချိန်စံနှုန်း မမီသော ကွန်ကရစ်လမ်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် မေလ ၁၅ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးတို့က ဝန်ခံ ပြောကြားလိုက်သည်။
ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ခရီးသွားပြည်သူ ၃၆၇ ဦး သေဆုံးခဲ့သော ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် မေလ ၁၂ ရက်နေ့က ရာဇာမင်း ခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နေပြည်တော်ရှိ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်စဉ် ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးတင့်တို့က အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အမြန်လမ်း မဟုတ်တော့ဘူး။ ကွန်ကရစ်လမ်းပါ။ ဒီလမ်းကို စံချိန်မီ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့မှာ အမှားတွေ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေဆဲပါ။ ပြုပြင်သွားရမှာပါ” ဟု ဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေးက ဆိုသည်။
အဆိုပါလမ်းသည် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ညီညွှတ်မှု မရှိသည့်အပြင် လက်ရှိ စံချိန်စံညွှန်း၏ အတိုင်းအတာကိုလည်း ပြောကြား၍ မရနိုင်ကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးတင့်က ထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွန်းများ မှီစေနိုင်ရန် အမေရိကန်အစိုးရ၏ အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သော်လည်း မည်သည့်အချိန်တွင် ပြီးစီးအောင် လုပ်နိုင်မည်ကို ခန့်မှန်းမရသေးကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အဆိုပါ ကွန်ကရစ်လမ်းသည် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွန်း မမီသော်လည်း ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် ငါးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ယာဉ်မောင်း ပေါ့ဆမှုကြောင့် ၆၃ ဒသမ ၆၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ယာဉ်ကြောင့် ၂၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရာသီဥတုကြောင့် ၀ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် လမ်းအရည်အသွေးကြောင့် ၁ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းသာ မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မေလ ၁၂ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီ ၂၀ ခန့်က ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် အမှတ် ၁၉၇ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရာဇာမင်း ခရီးသည်တင် အမြန်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ၁၄ ဦး သေဆုံး၊ ၃၀ ခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရာ ယင်းယာဉ်လိုင်းကို မဆင်မခြင် မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် ခရီးသည်များ လုံခြုံစွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ရန် အားနည်းခဲ့ခြင်းကြောင့် နေပြည်တော် ကုန်လမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဖွဲ့က ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-ရန်ကုန် ခရီးစဉ် ပြေးဆွဲခွင့်ကို မေလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
“ကားသမားတွေက ခေါက်ပြန် မောင်းနေရတာ။ ရန်ကုန်က မနက်ထွက် နေပြည်တော်က နေလယ် ပြန်ထွက်။ တနင်္ဂနွေဆို တချို့ သုံးခေါက် မောင်းရတယ်” ဟု အဝေးပြေး ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
၃၆၆ မိုင်ခန့် ရှည်လျားသော ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးမှာ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်လမ်း စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ငါးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှုပေါင်း ၇၃၀ ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ သေဆုံးသူပေါင်း ၃၆၇ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူပေါင်း ၁၀၀၀ ဦးကျော်အထိ ရှိခဲ့သဖြင့် အမြန်သေလမ်းမကြီးဟု ပြောဆို ဝေဖန်ခဲ့သည်ကို ထောက်ရှုရလျှင် အမြန်လမ်းကို တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ အနေနှင့် ရှက်မည်ဆိုလျှင် ရှက်သင့်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း တောင်ငူမြို့ခံ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးက သုံးသပ် ပြောကြားသည်။
လမ်းတည်ဆောက်မှုအတွက် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များကို အသုံးပြု၍ အမှန်တစ်ကယ် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသည့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သေချာသည့် သက်သေ သာဓကကို မတွေ့ရသေးကြောင်း လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးအဖြစ် ၁၅ နှစ်နီးပါး လုပ်သက်ရှိသူ တောင်ငူမြို့ခံ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက သုံးသပ် ပြောဆိုသည်။
“ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းမယ် ဆိုရင် အောက်ခံမြေသားက အနည်းဆုံး အသား သေလောက်တဲ့ အတိုင်းအတာ ပမာဏလောက် ထားရှိရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ အမြန်လမ်းမကြီးက နှစ်တိုတိုအတွင်း ပြီးစီပြီး နှစ်တိုတိုအတွင်းမှာပဲ ဖြတ်သန်း သွားလာခွင့် ပြုခဲ့တာကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး” ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောဆိုသည်။
ရာဇာမင်းကား မှောက်ပြီးနောက် ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်း တိုးချဲ့ရန် အစိုးရ ဆုံးဖြတ်
5/15/2014 10:19:00 AM Myanmar-news
မတော်တဆမှု မကြာခဏ ဖြစ်နေသည့် ရန်ကုန် – နေပြည်တော် – မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး မြင်ကွင်း
ခရီးသည် ၁၄ ဦးသေဆုံးစေခဲ့သော ရာဇာမင်း ခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ယာဉ်တိုက်မှု၊ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၏ ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်းဧရိယာ တိုးချဲ့သွားရန် အစိုးရက ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများ စုံညီစွာ တက်ရောက်သော အမြန်လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အစည်းအဝေးကို မေလ ၁၃ ရက်နေ့ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်းဧရိယာကို တိုးချဲ့ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိုင် ၂၀၀ ရှည်လျားသော ရန်ကုန် – နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမကြီးကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ခြောက်လမ်းသွား သို့မဟုတ် ရှစ်လမ်းသွား လမ်းမကြီးအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်မည် ဆိုပါက လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ နည်းပါးသွားနိုင်သဖြင့် ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စ၍ အဆင့်မြှင့်ရန် အစိုးရက ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
“တခြားဦးစားပေး ကိစ္စတွေလည်း ရှိခဲ့တော့ အမြန်လမ်းမကြီး အဆင့်မြှင့်ဖို့ကို စောင့်နေခဲ့ရတယ်။ မတော်တဆမှုတွေလည်း ဖြစ်လာတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာတင် ခြောက်လမ်း၊ ရှစ်လမ်းသွား လမ်းအဖြစ် ဖောက်ဖုိ့လူကြီးတွေက သဘောတူလိုက်ကြပြီ။ အဆင့်မြှင့်လိုက်ရင်တော့ မတော်တဆမှုတွေ နည်းသွားမယ်” ဟု ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ရှင်းပြသည်။
ရန်ကုန်-နေပြည်တော် လမ်းမကြီးဧရိယာ တိုးချဲ့ရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ ဘီလီယံ ထောင်ချီ ကုန်ကျခံ သုံးစွဲမည်ဖြစ်ပြီး အမြန်လမ်းမကြီးဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုလည်း လွှတ်တော်သို့ တင်ပြ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
လူသေဆုံးမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ ဖြစ်ပွားနေသည့် အမြန်လမ်းမ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပေါင်းစုံမှ တာဝန်ရှိသူများစုပေါင်း အဖြေရှာ ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူးကြီးနေဝင်းက “အရင်တုန်းကတော့ ယာဉ်မောင်းတွေနဲ့ ယာဉ်တွေအပေါ် စစ်ဆေးမှု၊ အရေးယူမှုတွေ မရှိခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အရေးယူမှုတွေ ရှိလာတော့မယ်။ ရာဇာမင်းကား တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်စဉ်က ယာဉ်မောင်းကိုတော့ အချုပ်နဲ့ ဆေးရုံမှာထားထားတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အမြန်လမ်းတွင် မတော်တဆမှုများ တားဆီးနိုင်ရန် ဒုတိယ သမ္မတ ၂ ဦးဥာဏ်ထွန်း ဦးဆောင်၍ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဗဟိုဘဏ်၊ အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့များနှင့် အဝေးပြေးမော်တော်ယာဉ် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတို့ ပါဝင်သော အမြန်လမ်း မတော်တဆမှု လျော့နည်းရေးစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“အဝေးပြေးလမ်းတွေမှာလည်း ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်တာတွေက အမြန်လမ်းထက် များနေပေမယ့် ကြီးကြီးမားမား ဆိုရင် အမြန်လမ်းမှာ လာဖြစ်နေတာ တွေ့နေရတယ်” ဟု အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး ဦးကြည်ဇော်မြင့် က သုံးသပ်သည်။
မေလ ၁၂ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရာဇာမင်း ခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုတွင် ရာဇာမင်းကားသည် နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာလာစဉ် ည ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ် မိုးရွာသွန်းနေချိန် မိုင်တိုင် ၁၉၇ အနီး လမ်းပေါ်တွင် တင်နေသော ရေအိုင်ကို ဖြတ်သန်းစဉ် ကားသည် အရှိန်လွန် စလစ်ဖြစ်ကာ တပတ်လည်၍ မီးရထား ခုံးကျာ် တံတား အောက်သို့ ပြုတ်ကျသွားခဲ့သည်။
ကားပြုတ်ကျမှုကြောင့် ကားပေါ်မှ အမျိုးသား ၁၀ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၄ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၄ ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ၃၀ ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း၊ ဒဏ်ရာရရှိသူများတွင် ၃ ဦးမှာ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ် ရသည့် အခြေ အနေရှိသည်။
မေ ၁၄ ရက်နေ့ နေပြည်တော်တွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားသော ခရီးသည် ၁၄ ဦး အတွက် အလုံးစုံ အာမခံ ကျပ် ၁၀သိန်း၊ အထူးခရီးသွား အာမခံ ကျပ် သိန်း ၃၀၊ သူတပါးထိခိုက်မှု အာမခံ ကျပ် ၅ သိန်း စုစုပေါင်း ၄၅ သိန်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအတွက် ဒဏ်ရာရသည့် အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ငွေကျပ် ၁ သောင်းမှ ၂၄ သိန်း အထိ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ရာဇာမင်းယာဉ်လိုင်းကလည်း သေဆုံးထိခိုက်သော ခရီးသည်များအတွက် ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန္တလေး အမြန် လမ်းမကြီးတွင် ဧပြီလ ၁ ရက်မှ မေလ ၁၃ ရက်အထိ ထိခိုက်မှုပေါင်း ၇၆ မှု၊ ဒဏ်ရာရသူ ၁၆၉ ဦးနှင့် သေဆုံးခဲ့သူ ၄၈ ဦးရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးမှု စံချိန်တင်ခဲ့သည့် လများ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အမြန်လမ်းမကြီး စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်မှ ဧပြီ ၂၂ ရက်အထိသေဆုံးသူ ၃၅၃ ဦး နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ ၁၀၈၄ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့၏ စာရင်းဇယားများအရ သိရှိရသည်။
5/14/2014 06:44:00 PM Myanmar-news
“ကို...ရောဟင်...” ဟု ခုတင်ပေါ်မှ တောင့်တောင့်ကြီး ဆန့်နေရသည့် အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးက မပွင့်တပွင့် လေသံဖြင့် ခပ်တိုးတိုးလေး မေးရှာသည်။
သူမ၏ မျက်နှာအနှံ့တွင် ပွန်းရှထားသည့် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တို့က ပြည့်လုနီးပါး။ မေးစေ့တစ်ခုလုံးမှာ မိုးကျ သပြေသီးပမာ ညိုပြောင်ပြောင် အရောင်တောက်နေသည်။ ပြင်းထန်သော အတွင်းပိုင်း ဒဏ်ရာတို့ကို သူမက ခေတ္တမေ့ထားဟန် တူသော်လည်း ဦးခေါင်း အနည်းငယ် စောင်းရုံဖြင့် သူမထံမှ အော်ညည်းသံ ထွက်လာသည်။
အော်ညည်းသံကြားမှပင် မေလ ၁၂ ညနေပိုင်းက နေပြည်တော်-ရန်ကုန်သွား ရာဇာမင်း အဝေးပြေးကားပေါ်မှ သူမနှင့် ပူးတွဲထိုင်လိုက်လာသော ခင်ပွန်းကို သူမက မေးခြင်းဖြစ်သည်။
အထိတ်တလန့်ဖြစ်ဖွယ် မော်တော်ယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေသော ရန်ကုန်- မန္တလေး အမြန်လမ်းမပေါ်တွင် အကျွတ်အလွတ်ပွဲ ကျင်းပအပြီး တစ်ရက်ခန့်အကြာ မေလ ၁၂ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီက နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်သို့ ထွက်ခွာသွားသော ရာဇာမင်း ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှာ အမြန်လမ်းတွင် တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ခရီးသည် ၁၄ ဦးသေဆုံးပြီး ကျန်ရှိ ခရီးသည် ၃၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ သေဆုံးသူ ၁၄ ဦးတွင် သူမ၏ ခင်ပွန်းသည်လည်း တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အတွင်း လူ ၁၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့သော ဒုတိယမြောက် အမြန်လမ်း ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုလည်း ဖြစ်သည်။
အမြန်လမ်း ၁၁၆ မိုင်တွင် ဧပြီလ ၁၂ ရက် ည ၂ နာရီခွဲအချိန် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဝေးပြေးယာဉ်နှင့် မတ်တူးယာဉ် တိုက်မိအပြီး ၁၃ ဦး သေဆုံးပြီးနောက် တစ်လခန့်အကြာ ရာဇာမင်း ယာဉ်တိုက်မှု ထပ်ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဟိုဘက်အဆောင်မှာပါ။ ညီမလေး စိတ်မပူနဲ့နော်” ဟု ရာဇာမင်းယာဉ်ပေါ်ပါ ခင်ပွန်းသည်အကြောင်း မေးနေသူကို လူနာစောင့် အမျိုးသမီးက ပြန်အဖြေ ပေးလိုက်သည်။
သို့သော် ဘေးမှ လူနာသတင်းမေးများကို မြင်သာရန် လူနာစောင့်က မျက်လုံးတစ်ဖက် မှိတ်ပြလိုက်သည်။ ထိုလူနာစောင့်၏ မျက်နှာက တစ်ချက်တစ်ချက် ငိုမဲ့မဲ့။ ဆုံးပါးသွားသူ ခင်ပွန်း ရှိနေသေးကြောင်း လိမ်နေရသည့်အပြင် မချိတင်ကဲ ပြုံးရသည့် အလုပ်ကိုပါ လူနာစောင့်က ပူးတွဲလုပ်နေရသည်။
“ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်။ ကောင်းသွားကြမှာပါ” ဟူသော အားပေး စကားလုံးတို့က သွေးညီနံ့၊ သွေးပုပ်နံ့တို့က ပျံ့နှံ့နေသော ခွဲစိတ်ဆောင်အမှတ် (၁) နှင့်(၂) တို့တွင် ရောပြွမ်းနေ၏။
တိမ်းမှောက်သွားသော ရာဇာမင်း ယာဉ်သည် ညနေ ၆ နာရီ ၄၅ ဝန်းကျင်၌ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၉၇ မိုင်ဝန်းကျင်ရှိ တံတားပေါ် အတက်တွင် လမ်းချော်၍ ချောက်အတွင်း ပြုတ်ကျခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကားမှောက်သည်ကို ဝင်ရောက်ကူညီ ကယ်ဆယ်ခဲ့သည့် မကွေးမြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ အမြန်လမ်းမှ ပြန်လာသူ ဦးစိုးမင်းလွင်က ပြောကြားသည်။
ဦးစိုးမင်းလွင်မှာ ထိုးကျသွားသော ယာဉ်ပေါ်မှ ခရီးသည်များကို ပထမဆုံး ကူညီခဲ့သူ။
အခြား ယာဉ်တိမ်းမှောက်၊ တိုက်မှုများကဲ့သို့ပင် အမြန်လမ်း သမိုင်းတစ်လျှောက် လူအများဆုံး သေဆုံးခဲ့သော ယခုယာဉ်တိုက်မှုကိုလည်း လူ့အပြစ်လော၊ လမ်းအပြစ်လော အငြင်းပွားကြဦးမည်။ လမ်းအပြစ် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသူတို့တွင်လည်း သက်သေများရှိသည်။
လမ်းတည်ဆောက်မှုအတွက် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များကို အသုံးပြု၍ အမှန်တကယ် အရည်အသွေး ပြည့်ဝသည့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သေချာသည့် သက်သေသာဓက မတွေ့ရသေးကြောင်း လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးအဖြစ် ၁၅ နှစ်နီးပါး လုပ်သက်ရှိသူ တောင်ငူမြို့ခံ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
“ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းမယ်ဆိုရင် အောက်ခံမြေသားက အနည်းဆုံး အသားသေလောက်တဲ့ အတိုင်းအတာ ပမာဏလောက် ထားရှိရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ အမြန်လမ်းမကြီးက နှစ်တိုတိုအတွင်း ပြီးစီးပြီး နှစ်တိုတို အတွင်းမှာပဲ ဖြတ်သန်း သွားလာခွင့် ပြုခဲ့တာကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး” ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။
ယခုနှစ် သင်္ကြန်လေးရက်တာ ကာလအတွင်းမှာပင် အဆိုပါ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်၌ ယာဉ်မတော်မဆ ဖြစ်ပွားမှုပေါင်း ၂၂ ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူသေဆုံးမှု ၁၆ ဦး အထိရှိခဲ့ကာ လူပေါင်း ၄၃ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ၏ ပြောဆိုချက်ကို ထောက်ရှုပါက အမြန်လမ်း၏ အနေအထားမှာ စိုးရွံ့စရာပင်။
ထိုနည်းတူ ယာဉ်မောင်းအပြစ် (လူ့အပြစ်) ဟုဆိုရန်လည်း အကြောင်းခြင်းရာများ ရှိနေသည်။
မေလ ၁၂ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီတွင် နေပြည်တော် မြို့မဈေးကားဂိတ်မှ ထွက်ခဲ့သော ရာဇာမင်းကားသည် နေပြည်တော် စစ်ဆေးရေးဂိတ်အထွက် ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန္တလေး အမြန်လမ်းပေါ် စရောက်ကတည်းကပင် ဘယ်ညာယိမ်းနေပြီဟု ခရီးသည်အဖြစ် လိုက်ပါသွားသည့် အစိုးရဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးက ဆိုသည်။
“မြန်တာကလည်း မြန်တယ်။ ထိန်းမရဖြစ်တာ သိသာတယ်” ဟု ၎င်းက ခုတင်ပေါ်မှ ပက်လက် အနေအထားဖြင့် ပြောသည်။
ကားပေါ်လိုက်ပါခဲ့သည့် မန္တလေးမြို့နေ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကမူ ကားမောင်းသူမှာ မူမမှန်ဟု ပြောသည်။
“ကားမောင်းတဲ့သူက မူးနေတာလေကွာ” ဟု ဘယ်လက်မောင်းရိုးနှင့် နံရိုးနှစ်ချောင်း ကျိုးသွားသောသူက မကျေနပ်သော လေသံဖြင့် ဆိုသည်။
ကားမှောက်ရခြင်းမှာ လမ်းချောနေသဖြင့်ဟု ပြောဆိုနေသော်လည်း အခင်းဖြစ်ပွားပြီး မကြာမီ အဆိုပါ နေရာသို့ ရောက်သွားချိန်တွင် လမ်းမှာ ခြောက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျုတာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဦးဘဆွေက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီတော့ လူအမှားတွေလည်း မကင်းဘူးလို့ ပြောရမှာပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
လူအပြစ်လည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ လမ်းအပြစ်လည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ နှစ်ခုစလုံးလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ယင်းကြောင့်ပင် အမြန်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ဦးနေဝင်းက ယာဉ်မတော်တဆမှုများသည် ကားကြံ့ခိုင်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိသည့် အမှားများ ရှိသကဲ့သို လူသားအမှားကြောင့် အများဆုံး ဖြစ်ပွားရခြင်းကြောင့် အမြန်လမ်းမကြီး တစ်လျှောက်ရှိ အချို့လမ်းပိုင်း နေရာများသည် တစ်ဖြောင့်တည်းရှိပြီး အကွေ့အကောက် နည်းပါးသောကြောင့် ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် ဂရုစိုက် မောင်းနှင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိပေး ပြောဆိုထားသည်။
ယာဉ်တိုက်၊ တိမ်းမှောက်မှုများ များပြားလာကတည်းက အမြန်လမ်းမကြီး ပုံမှန်ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲမှုရုံးမှ အထက်မြန်မာပြည် အင်ဂျင်နီယာမှူး ဦးပြည်ဖြိုးဆယ်က ပြောကြားသည်။
“ရာဇာမင်း ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုမှာ ယာဉ်မောင်းအနေနဲ့ ပေါ့ဆမှုလေးတွေကို တွေ့ရှိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ရာဇာမင်း ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ၄၄ ဦးအနက် ၁၄ ဦး ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီး ကျန်ရှိသူများမှာ အနည်းနှင့်အများ ဒဏ်ရာရကြသည်။ အားလုံး နေပြည်တော် ခုတင် ၁၀၀၀ ဆေးရုံတွင်။
နံရိုးကျိုးခြင်း၊ အရိုးအက်ခြင်း၊ ခေါင်းကွဲခြင်း၊ ခါးမလှုပ်နိုင်ခြင်း၊ မျက်နှာဖူးရောင်ခြင်းနှင့် မမြင်နိုင်သည့် ကိုယ်တွင်းပိုင်း ဝေဒနာတို့က အသက်ရှင် ကျန်ခဲ့သူတိုင်းတွင် ဖြစ်နေဆဲ။ ထူးခြားသည်မှာ ခေါင်းကွဲ၊ ခြေပေါက်ဒဏ်ရာတို့က သုံးမြှောင့်ပါ စကေဘာခေါ် အချွန်လက်နက်ဖြင့် ထိုးခံရသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ (ဥပမာ-မာစီဒီးကားတံဆိပ်နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည်)။ ထို့အပြင် ဦးခေါင်းတွင် ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာကြောင့် ကွက်၍ရိပ်ထားရသော ကတုံးကွက်တို့က လူနာအများစုတွင် ရှိပြန်သည်။
“ကားရှေ့ပိုင်းနဲ့ အရင်ကျတာ။ ရှေ့မှန်ကွဲသွားတော့ ကျော်ခွပြီး အပြင်ထွက်လိုက်တယ်။ ဘေးမှာက သွေးတွေနဲ့ အကုန်သေနေပြီလို့တောင် ထင်ထားတာ” ဟု နေပြည်တော်မှ ပြန်လာသော အစိုးရဝန်ထမ်းက သူမ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြသည်။
အဆိုပါကား ပြုတ်မကျမီကပင် ခရီးသည်တို့က အော်ဟစ်ခြင်း မရှိသလို၊ အခင်းဖြစ်ပြီး ချိန်တွင်လည်း ကျယ်လောင်သော အော်ဟစ်သံမထွက်ဟု သူမက ထပ်လောင်းဆိုသည်။
ခရီးသည်များ၏ အော်ဟစ် ညည်းတွားသံက လူနာဆောင်တစ်ခုလုံး ခပ်သဲ့သဲ့ ထွက်နေသည်။ ယမန်နေ့ ညပိုင်းကတည်းက တာဝန်ကျနေသော ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုများက လူနာ၏ ဒဏ်ရာများကို ချုပ်ပေးရသည့် အလုပ်က မေလ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ဝန်းကျင် အချိန်အထိ မပြီးသေး။ မစိုးရိမ်ရသည့် အသေးစား ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတို့ကို ချုပ်ပေးနေရသည့် အလုပ်က တစ်ခုတင်ဝင် တစ်ခုတင်ထွက် ။
“ညတည်းက မအိပ်ရသေးဘူး။ စိတ်ချရလောက်မှ ပြန်ရမှာ” ဟု အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိ သူနာပြု ဆရာမလေးတစ်ဦးက ဆိုသည်။ သူမ စွပ်ထားသော လက်အိတ်နှင့် ဆေးတွန်းလှည်းပေါ်တွင် သွေးစတို့က မြင်မကောင်း။
ခေါင်းတွင် ဆယ်ပြားစေ့ခန့် ဟောင်းလောင်း ပေါက်နေသည့် လူနာ၊ အပြင်းအထန် ညည်းတွားနေပြီး နာလွန်းသဖြင့် အောက်ပိုင်းအဝတ်ပင် မကပ်နိုင်အောင် ရုန်းနေသော လူနာ စသည်ဖြင့် . . . ။
ထိုလူနာများတွင် အစာစားနိုင်သည့် လူနာဟူ၍ အနည်းအကျဉ်းသာ ရှိသည်။ ရာဇာမင်းကားကို မောင်းနှင်သည့် ဒရိုင်ဘာက အတွင်းလူနာအဖြစ် ကုသနေရသည်။ ယာဉ်အကူကား အခြားခရီးသည် ၁၃ ဦးနှင့်အတူ လူ့လောကကို စွန့်ခွာသွားပြီ ဖြစ်သည်။
လူနာတချို့သူတို့မှာ စိုးရိမ်ရသေးသည်ဟု နေပြည်တော်ကောင်စီမှ သတင်းထွက်သည်။ နံနက်ပိုင်းတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးနှင့် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးတို့ ရောက်လာသည်။ လူနာ တစ်ဦးစီအတွက် ထောက့်ပံ့ငွေများ ပေးသည်။ သတိရသူကို အားပေးစကား ပြောသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထောက်ပံ့ငွေ အရေအတွက် မသိရ။
“စာအိတ်လေးနဲ့ ထည့်ပေးသွားတယ်။ ဘယ်လောက်မှန်း မသိပါဘူး” ဟု လူနာစောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
သူမစောင့်နေသော လူနာအမျိုးသမီးမှာ အသက် ၅၀ ခန့်အရွယ် ရှိသည်။ လူနာ သတိမရသေး၍ ဆရာဝန်နှစ်ဦး နံဘေးတွင် ရပ်စောင့်နေသည်။ ကျန်လူနာစောင့် တစ်ယောက်က သတိမေ့နေသူ၏ နှာခေါင်းပေါ်တွင် သံပုရာသီး တစ်လုံးဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ အငိုတစ်ဝက် မျက်ဝန်းတို့က ပူလောင်နေသည့်ဟန်ပြ၏။
ဝန်ကြီးတို့က လူနာများကို ကြည့်၍ စိတ်မကောင်း ဖြစ်သည့်ဟန်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းပိုင်းတွင် နေ့စဉ် ဖြတ်သန်း သွားလာနေသော ကားအစီးရေမှာ ၃၀၀ နီးပါး ရှိနေပြီး ယာဉ်လိုင်းပေါင်း ၅၀ ကျော်အနက် ယာဉ်မတော်တဆမှု မဖြစ်ပွားသေးသော ကားလိုင်းမှာ မရှိသလောက်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်ယာဉ်လိုင်းတစ်လိုင်းမှ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ မှောက်သည့် ယာဉ်များမှောက် နေသည်။ လမ်းပြင်သူများကလည်း ဆက်ပြင်နေသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် မကုန်မီ လမ်းတိုးချဲ့ မှုများအပြင် ၂၅ မိုင် အရှည်ထိ ကတ္တရာ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ စတီးလက်ရမ်းများ တပ်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အမြန်လမ်း အင်ဂျင်နီယာမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ကားသမား ပေါ့ဆမှုကြောင့် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရင်တောင်မှ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အထိ ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု များလာသဖြင့် သေမင်းတမန်လမ်းဟုပင် သမုတ်ခံလာရသော ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း၏ အရှည်ကား ၃၆၆ မိုင် ၃ ဖာလုံ ရှိသည်။
လမ်းစဖွင့်သည့် ၂၀၀၉ မှ ယနေ့အထိ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မူကြောင့် ၃၆၇ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
သေဆုံးမှုသည် တစ်မိုင်တစ်ဦးနှုန်း ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော အမြန်လမ်း ဖြစ်နေပြီ။
အောင်ထက်၊ ဇေယျာကို (တောင်ငူ)
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတွင် ယာဉ်တိုက်မှုနှင့် လူသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်များ မြင့်တက်လာသည့်အတွက် ချို့ယွင်းနေသည့် လမ်းပိုင်းများကို ပြုပြင်ပြီး ယာဉ်မောင်းနှင့်ယာဉ်များကိုလည်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည်
5/01/2014 08:36:00 AM Myanmar-news
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းပိုင်းတစ်နေရာအား ၂၀၁၄ နှစ်ဆန်းပိုင်းက တွေ့ရစဉ်
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးတွင် ယာဉ်တိုက်မှုနှင့် လူသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်များ ယခုနှစ်အတွင်း ပြန်လည်မြင့်တက်လာသဖြင့် ချို့ယွင်းနေသည့် လမ်းပိုင်းများကို ပြုပြင်ပြီး ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်များကိုလည်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ဦးဝင်းနောင်က ဧပြီ ၃၀ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေသည့်ယာဉ်များ မတော်တဆ အများဆုံးဖြစ်ပွားသည့် နေရာများတွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များ ထားရှိပြီး စောင့်ကြည့် ကြပ်မတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“လမ်းရဲ့ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုတွေ၊ လူသေဆုံးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ ရှိတယ်။ အချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် လမ်းတွေလိမ်နေတာ၊ လမ်းတွေကောက်နေတာ၊ လမ်းတွေမဖြောင့်ဖြူးတာတွေ ရှိနေတယ်။ လမ်းရဲ့ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဘီးကွဲပြီး ယာဉ်မှောက်တာတွေ၊ လမ်းလယ်မှာရှိတဲ့ ဘလောက်တုံးတွေကို ကျော်တက်ပြီးတော့ လမ်းလယ်ကိုရောက်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ၊ ယာဉ်က ခုန်ပေါက်ပြီးတော့ လေပေါ်မှာလည်ပြီး လွင့်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လမ်းအကွေ့အကောက်တွေကြောင့် ယာဉ်မတော်မဆ တိမ်းမှောက်မှုတွေ ဖြစ်နေတာတွေလည်း တွေ့ရတယ်”ဟု ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ဦးဝင်းနောင်က ပြောကြားသည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားနေသည့် အကြိမ်အရေအတွက်နှင့် လူသေဆုံးမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တွင် အနက်ရောင်နယ်မြေ၊ အညိုရောင်နယ်မြေ၊ အ၀ါရောင် နယ်မြေနှင့် အဖြူရောင်နယ်မြေဟု ခွဲခြားကာ အသိပေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ယာဉ်တွေကလည်း စည်းစနစ်တကျ မောင်းနှင်ဖို့နဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုအပိုင်းကို စစ်ဆေးဖို့အတွက် အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာ စစ်ဆေးရေးဂိတ် ငါးခုဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ စောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။ အကြမ်းဖျင်းလတ်တလော ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုတွေ မဖြစ်စေဖို့ ယာဉ်ရဲ့ ဘရိတ်၊ တာယာနဲ့ အောက်ပိုင်းနေရာအချို့တွေကို စစ်ဆေးပြီးတော့မှ မောင်းနှင်ခွင့် ပေးသွားပါမယ်။ မော်ဒယ်အရမ်းနိမ့်တဲ့ ယာဉ်တွေကိုလည်း မောင်းနှင်ခွင့် မပြုတော့ဘူး။ အချို့ယာဉ်တွေဆိုရင် ခရီးသည်ထွက်ပေါက် တံခါးတွေနားမှာ ထိုင်ခုံတွေ ရှိနေတာတွေကြောင့် အရေးပေါ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ အလွယ်တကူ ဆင်းလို့မရတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါတွေကို အားလုံးစစ်ဆေးပြီးတော့မှ မောင်းနှင်ဖြတ်သန်းခွင့် ပြုသွားတော့မှာပါ”ဟု ရုံးအဖွဲ့မှူး က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေသည့် အဝေးပြေးခရီးသည် ယာဉ်မောင်းများ အားလုံး၏ ယာဉ်မောင်းကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး အောင်မြင်သည့် ယာဉ်မောင်းများကိုသာ ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေး၍ မောင်းနှင်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အတူ ယာဉ်မောင်း၏ ပေါ့လျော့မှုကြောင့် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါက အဆိုပါယာဉ်မောင်းအား မည်သည့်ယာဉ်လိုင်းတွင်မှ မောင်းနှင်ခွင့် ပိတ်ပင်သွားရန်အတွက် ယာဉ်လိုင်းအသင်းကြီးများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အဝေးပြေးခရီးသည်ယာဉ်တွေမှာ ယာဉ်မောင်းနှစ်ဦးစီ ထားရှိမယ်။ ပထမယာဉ်မောင်းက သူ့အနေနဲ့ လူမှုရေးအခက်အခဲတွေ အခြားစိတ်ကို တည်ငြိမ်မှု မရှိနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒုတိယယာဉ်မောင်းကို မောင်းနှင်ခွင့်ပြုသွားမယ်။ အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်းမှာ ယာဉ်မောင်းတွေကို စောင့်ကြည့် သတင်းပေးမယ့်စနစ်ကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ ဒါ့အပြင် ယာဉ်မောင်းတွေ ကျန်းမာရေး၊ အသက်အရွယ်အပိုင်းနဲ့ အရက်သေစာ သောက်စားမှု ရှိ၊ မရှိကိုလည်း စစ်ဆေးသွားမယ်”ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးရှိ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေသည့် နေရာများကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်နှင့်ယာဉ်မောင်းကို စစ်ဆေးကြပ်မတ်မှုအား ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အမြန်လမ်းမတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ၂၅၉ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ၁၁၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ ၆၂၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အလားတူ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁ရက် မှ ဧပြီ ၂၂ ရက်အထိ ယာဉ်တိုက်မှု ၁၁၅မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၆၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ ၂၈၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်- မန္တလေး အမြန်လမ်းမ အန္တရာယ်ကင်းရန် ပရိတ်ရွတ်
6/06/2014 07:43:00 AM Myanmar-news
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးကို အသုံးပြုနေတဲ့ ခရီးသွားပြည်သူတွေ ဘေးရန် အပေါင်းကနေ ကင်းဝေးဖို့ သံဃာတော်တွေက ရန်ကုန်-မန္တလေး အသွားအပြန် ပရိတ်ရွတ်ဖတ် ပူဇော်နေပါတယ်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးမှာ ကားတိမ်းမှောက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက် ခရီး သွားပြည်သူများ အန္တရာယ်ကင်းဖို့ ရန်ကုန်-မန္တလေး အသွားအပြန် အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်ရွတ်ရတာလို့ မြတောင်ကျောင်းတိုက်က သံဃာတော်တပါးက မိန့်ကြားပါတယ်။
မန္တလေး မြတောင်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးဝရဥာဏက “ပရိတ်ရွတ်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ခရီးသွားပြည်သူတွေ ဘေးအပေါင်းရန်အပေါင်းက ကင်းဝေးလိမ့်မယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလမ်းမှာ အမြဲတမ်းသွားလာနေရာမှာ ကားတိမ်မှောက်မှုတွေကြောင့် လူတွေ ထိခိုက်သေဆုံးနေတာကို မြင်တွေရတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလို ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ လတွေကတည်းက တိုင်ပင်ခဲ့ကြတာလို့ ဒီအစီစဉ် ဖြစ်မြောက်ရေး လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဥက္ကာအောင် ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေး သူငယ်ချင်းများအဖွဲ့ ကိုမြင့်ဇော်က ပြောပါတယ်။
“ဒီလမ်းမကြီးဟာ လတိုင်းပဲ ပြည်သူလူထုတွေ ကားမှောက်တာ သေကျေတာတွေ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါဘာလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲလို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ၀ိုင်းစုပြီး ပြောတဲ့အခါမှာ ပရိတ်ရွတ်ရင်တော့ ကောင်းမယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက် အနေနဲ့ ပရိတ်က အန္တရာယ်အကင်းဆုံးပဲ။ ဒီတော့ မန္တလေးကနေရန်ကုန်ထိ ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေးအထိ အသွားအပြန်ရွတ်နိုင်လို့ ရှိရင်တော့ ကောင်းမယ်ပေါ့။ ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကောင်းမယ်ပေါ့။ အဲလိုယုံကြည်ချက်နဲ့ လုပ်ဖြစ်တာပါ။”
ဒီနေ့စတင်ပြီး သံဃာတော် ၁၀ ပါးနဲ့ အတူ မန္တလေးကနေ စတင်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီး မန္တလေးမြို့ ဥက္ကာအောင် ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေး သူငယ်ချင်းများနဲ့ ချမ်းမြသုခ လူမှုကူညီရေး အသင်းတို့က ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
5/17/2014 04:45:00 AM Myanmar-news
ကျပ် ဘီလျံ ၉ဝဝ ကျော် ကုန်တဲ့ လမ်းမကြီး
လူအများ အပြား သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ယာဉ် မတော်တဆမှု အပြီးမှာ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန် လမ်းမကြီး ကို လမ်းစနစ် လုံခြုံရေး အတွက် ၄ လမ်းသွား ကနေ ၈ လမ်း သွား အထိ တိုးချဲ့ အဆင့်မြှင့်တင် တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယာဉ်မောင်း တွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေ လျှော့ချနိုင်ဖို့ လည်း အမြန်လမ်းမကြီးများ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး ကို လာမယ့် လွှတ်တော်မှာ တင်ပြဖို့ ရှိတယ်လို့ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့က အင်ဂျင်နီယာ မှူးကြီး ဦးကြည်ဇော်မြင့် က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းမကြီး အဆင့်မြှင့်ရာမှာ နိုင်ငံတကာက လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးနဲ့ နည်းပညာ အကူအညီတွေ ရဖို့ အစိုးရက ဆွေးနွေး နေသလို ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ အမြန် လမ်းမကြီးများ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ ကိုလည်း ဆောက်လုပ်ရေး ဌာနက ဆောင်ရွက် နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မိုင် ၃ဝဝ ကျော် ရှည်တဲ့ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းမကြီး ကို ငွေကျပ် ဘီလျံ ၉ဝဝ ကျော် အကုန်ကျခံ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေ ခဏခဏ ဖြစ်နေတော့ ဒီလမ်းကြီး အဆင့်မြှင့်ဖို့ အစိုးရ က ထပ်မံ လုပ်ဆောင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလမ်းကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အမြန် လမ်းမကြီး အဆင့်အထိ ဆောက်လုပ်ဖို့ ကုန်ကျစရိတ် မတတ်နိုင် ခဲ့တဲ့အတွက် ကွန်ကရစ်လမ်း အဖြစ် သုံးစွဲရတာ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလမ်းမကြီး ပေါ်မှာ လူပေါင်း (၁၄)ဦးသေဆုံးပြီး (၂၉)ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှု မှာ ရာဇာမင်း ခရီးသည်တင် ယာဉ်လိုင်းဟာ မဆင်မခြင် မောင်းနှင်မှု နဲ့ ခရီးသည် တွေကို လုံခြုံစွာ သယ်ယူ ပို့ဆောင် ရာမှာ စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ဖို့ အားနည်း ခဲ့တယ် ဆိုပြီး ဒီယာဉ်လိုင်း ရဲ့ ရန်ကုန်-နေပြည်တော် ခရီးစဉ် ပြေးဆွဲခွင့် ကို အစိုးရက ပိတ်သိမ်း လိုက်ပါတယ်။
အမြန်လမ်းမကြီးသည် စံချိန်စံနှုန်းနှင့် မကိုက်ညီ၍ သတိထားမောင်းနှင်ကြရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူ ပြောကြား
5/02/2014 02:34:00 PM Myanmar-news
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတစ်နေရာအား တွေ့ရစဉ်
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမှာ စံချိန်စံနှုန်းနှင့် မကိုက်ညီသေးသည့်အတွက် ယာဉ်မောင်းများ အနေဖြင့် သတိ ထားမောင်းနှင် ရန် အရေးကြီးကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်သူ့ဆောက် လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်လင်းက မေ ၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားသည်။ “အမြန်လမ်းဆိုတာက လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ မီးပွိုင့်တွေ မရှိရဘူး။ ကြားကဖြတ်ဝင်လာမယ့် ဖြတ် လမ်းတွေ မရှိ ရဘူး။အ၀ိုင်းတွေ အတားအဆီးတွေ မရှိရဘူး။လမ်းက ချိုင့်တွေအဖုအထစ်တွေ မညီမညာ တာတွေ မရှိရဘူး။ နောက်ပြီးတော့ လမ်းကွေ့တွေမှာလည်း စံချိန်မီတဲ့ ပေအချင်းဝက်တွေ မရှိတာ လည်းတွေ့ရတယ်။ ဒါတွေ အားလုံးပြည့်စုံမှ အမြန်လမ်းဆိုတဲ့အတိုင်း ကားတွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန် သွားလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံအောင် ပြန်လည် မပြင်ဆင်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ ယာဉ်မောင်းတွေက ခါးပတ်တပ်ဆင်ပြီးတော့ မောင်းနှင်ဖို့နဲ့ အမြန်နှုန်းထားကို ကီလို ၁၀၀ ထက် ကျော်ပြီး မမောင်းဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်”ဟု ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်လင်း က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တွင် လမ်းသတိပေးချက်များနှင့် ယာဉ်မောင်းများအား အသိပေးသည့် လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်များကို တပ်ဆင်မည်ဟု သိရသည်။
ထို့အပြင် အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ခြံစည်းရိုးခတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်မောင်းချိန် တစ်နာရီမှ နှစ်နာရီ အတွင်း ရောက်ရှိမည့် နေရာတိုင်းတွင် ယာဉ်နှင့်ခရီးသည်များ နားနေဆောင်နှင့် ကားပြုပြင်ရေးစခန်းများကို ထားရှိမည်ဟု သိရသည်။
“ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အများစုက ကီလို ၁၀၀ နဲ့အထက် မောင်းနှင်ထားတာ ကို တွေ့ရ တယ်။ တစ်ချို့ယာဉ်တွေဆိုရင် ကီလို ၁၂၀ အထက် မောင်းနှင်ကြ တယ်။ ကီလို ၁၂၀ နဲ့ မောင်းနှင် မယ်ဆိုရင် ကားက တစ်စက္ကန့်ကို ပေ ၉၀၊ ပေ ၁၀၀ လောက် သွားနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ယာဉ်မောင်းက အိပ်ငိုက်သွားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်”ဟု ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်လင်း က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းအား ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် USAID အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ လာရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ နှင့် လာမည့်သောကြာနေ့တွင် ဆွေးနွေး မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံ ဂျိုက်ကာအဖွဲ့မှလည်း ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းကို လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကျော်ခန့်က ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
“လမ်းလယ်ကျွန်းမှာရှိတဲ့ ကပ်တုံးအမြင့်ကြီးတွေကိုမြင်ရင် အဲ့ဒါတွေကို တိုက်မိမှာစိုးပြီး စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ သတိ ထားမောင်းနှင်နေရတဲ့အတွက် တစ်ဖက်မှာယာဉ်မတော်တဆမှုတွေ ကြုံနေရတယ်။ ဒီမှာက တုံး အမြင့်တွေ ကို အခိုင်အမာလုပ်ထားလို့ အဲဒါတွေကို တိုက်မိတဲ့ယာဉ်တွေကလည်း ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ကြီးကြီး မားမားထိခိုက်စေတယ်”ဟု အမြန်လမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင်သွားလာလေ့ရှိသူတစ်ဦး က ပြောပါ သည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီ (၁ ရက်မှ ၂၂ ရက် အထိ) ယာဉ်တိုက်မှု ၄၈ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၂၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ကာ ၁၁၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
သေမင်းတမန်လမ်းဟုမတွင်စေရန် ကျွန်တော်တို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်
5/14/2014 07:01:00 PM accident
Photo - Soe Min Lwin
အထူးအဆင့်မြင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်ကြီး၏ ဆိုဖာထိုင်ခုံပေါ်တွင် ကိုတင်ထွန်းတစ်ယောက် ဟိုရှာသည်ရှာနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ ကားပေါ်ပါ ခရီးသည် အများစုက ယာဉ်ပေါ်တက်သည်နှင့် အေးစက်နေသည့် လေအေးပေးစက်ဒဏ်ကို အံတုရန် ခြုံစောင်များနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေကြသည်။ အချို့မှာ အတူပါလာသည့် မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုများနှင့် စကားစမြည်ပြောနေကြသည်။ သို့သော်လည်း အသက် ၃ဝ စွန်းစွန်းသာရှိသည့် ကိုတင်ထွန်းမှာမူ ထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်မိသည် နှင့် ဟိုစမ်းသည်စမ်းရှာဖွေရေး စတင်လေသည်။ သို့သော်ရှာနေသည့်အရာကို ချက်ချင်းလက်ငင်းမတွေ့။ တော်တော်လေး ကြာမှသာ ဆိုဖာခုံကြားထဲ၌ ညပ်နေသည် ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု ဆိုလေ သည်။
”တော်တော်လေး ဆွဲထုတ်ခဲ့ရတယ်အသုံးမပြုဘဲ ဒီအတိုင်းပဲ ထားပုံရပါတယ်ဗျာ။ ဒင်းကိုလိုက်ရှာရတာ အေးနေတဲ့ကားပေါ် ချွေးတွေတောင် ပြန်တယ်” ဟု ၎င်း က ပြန်ြေ ပာင်း ပြောပြသည်။ ကိုတင်ထွန်း ရှာဖွေနေသည်က အခြားမဟုတ်။ ထိုင်ခုံနှင့်တွဲလျက်ပါသော လုံခြုံရေးခါးပတ်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ကိုတင်ထွန်း က နေပြည်ေ တ်ာနှင့် ရန်ကုန်ကို အလုပ်ကိစ္စဖြင့် ကူးချည်သန်းချည် ပြုလုပ်နေရသူ။ ယခင်က ကားပေါ်တက် လျှင် ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် အေးအေး လူလူနေတတ်သော် လည်း အမြန်လမ်းမ ကြီးပေါ်တွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု၊ ယာဉ်မီးလောင်ခြင်းများ များပြားလာသည့်အခါ ခရီးသွားရခြင်းအပေါ်တွင် ကြောက်တတ် လာသည်ဟု ဆိုသည်။
”ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပေ့ါဗျာ။ ကိုယ့် ဖာသာကိုယ် ကာကွယ်မှုရှိထားရင်၊ သတိ ရှိထားရင်တော့ မမှားဘူးပေါ့” ဟု ၎င်းက ခါးပတ်ကိုသေချာစွာ ပတ်လိုက် ရင်းစ ကား ပြော သည်။ ထို့ပြင်အခြားသူများ အိပ်မောကျနေသော်လည်း ၎င်းက မှေးရုံသာမှေးနေသည်။ ကားအသွားနှုန်းအနည်းငယ်မြန် လာသည်နှင့် ခေါင်းကို ဆတ် ခနဲထောင်ရင်း ဒရိုင်ဘာ ကို ချောင်းကြည့်သည်။ သူ့အပြုအမူများက ယာဉ်ပေါ်ပါအခြားခရီးသည်များနှင့်ဆိုလျှင် ကွဲပြားနေမှန်းသိသာသည်။ အချို့က ပိုသည်ဟုအမြင် ထင်ကောင်း ထင်ပါ လိမ့်မည်။ ကိုတင်ထွန်း ကိုယ်တိုင်ကပင် ထိုကဲ့သို့အလေ့အကျင့်ကို ယခုနှစ်ပိုင်းမှစ၍ ခရီးထွက်တိုင်း လေ့ကျင့်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ယင်းသို့ဆိုရလျှင် အဆင့်မြင့်ခရီး သွားယာဉ်ကြီးများနှင့်ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အိမ်စီးကားယာဉ်ငယ်များနှင့် ဖြစ်စေ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ခရီးသွားစဉ် သတိရှိရန်လိုအပ်မည်ဟု သင်တို့ ရော ထင်ပါသလား။
တိုးတက်လာပါသည် – သို့သော် အကောင်းကားမဟုတ်
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် သေဆုံးမှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများက တစ်နေ့တခြားတိုးတက်များပြားလာသည်ကို မြင်တွေ့နေကြရသည်။ တိုးတက်ခြင်းအား လက္ခဏာကောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသော်လည်း အမြန်လမ်း၏ သေဆုံးမှုများ တိုးတက်လာခြင်းမှာတော့ လက္ခဏာကောင်း မဟုတ်သည် က သေချာပါသည်။ ထိုအခြေအနေကို လမ်းတည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းမှုပြုသူများ၊ ယာဉ်မောင်းများနှင့် အမြန်လမ်းပေါ်သွားလာကြမည့် ခရီးသည်များအနေနှင့် မည်ကဲ့ သို့ လျှော့ချကြမည်နည်း။
မိုင်ပေါင်း ၃၃၆ မိုင် ၃ဖာလုံရှည်လျားသည့် အမြန်လမ်းမကြီးမှာ ရန်ကုန်မှ မန္တလေးထိ တစ်ဆက်တည်းဖောက်လုပ် ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပဲခူးတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အပါဝင် မြို့နယ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်ကို ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ရန်ကုန်-နေပြည်တော် လမ်းပိုင်းမှာ ၂ဝ၂ မိုင် ၁ ဖာလုံ ဖြစ်ပြီး ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်ကပင် စတင် အသုံးပြု ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်-မန္တလေးလမ်းပိုင်း ၁၆၄ မိုင် ၂ ဖာလုံကို ၂ဝ၁ဝ တွင် အသုံးပြုခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
တစ်ရက်လျှင်ပျမ်းမျှ ယာဉ်အစီးရေ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျော် ဖြတ်သန်းလျက်ရှိပြီး လအလိုက်ဆိုပါက တစ်လလျှင် ပျမ်းမျှ ယာဉ်နှစ်သိန်းကျော် နီးပါး ဖြတ် သန်းသွား လာနေကြသည့် ထိုလမ်းမကြီးတွင်တစ်လလျှင် ယာဉ်တိုက်မှုနှစ်ဆယ်ကျော် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိ သည်ဟု ဆောက် လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည် သူ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အမြန်လမ်းပြု ပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ ၂ဝ၁၃ တင်ပြချက်တွင် ဤသို့ သုံးသပ်ထားသည်။ ဖြစ်ပွားမှုမှာ ယာဉ်အစီးရေ တစ်သောင်းခွဲတွင် တစ်ကြိမ်နှုန်းပျမ်းမျှဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ များပြားသည့် ယာဉ် ဖြတ်သန်းမှုများနှင့် အမြန်လမ်းမကြီး အကြားတွင် တိုးပွားလာသည့် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုနှုန်း၊ သေဆုံးမှုနှုန်းများကို လျှော့ ချရန်အတွက် လည်း အချက်အလက်များစွာလိုအပ်နေမည်ဖြစ်သည်ဟု အမြန်လမ်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ဆိုသည်။ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ အင် ဂျင်နီယာမှူးကြီး ဦးကြည်ဇော်မြင့်ကမူ ၎င်းပြဿနာများမှာ လမ်းအနေအထားနှင့် ဒီဇိုင်းကြောင့် ဖြစ် ရခြင်းဟုတ်မဟုတ် ပိုင်းခြားသုံး သပ်မှု များ စောင့်ကြည့်ပြု လုပ် ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။ ”နေရာတစ်ခုထဲမှာပဲ အက်ဆီးဒင့်တွေပုံပြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒါ ဒီဇိုင်းမှားတယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ခုအဲ့ဒီလို မဟုတ်ဘူး” ဟူ၍လည်း ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ဆက်ပြောသည်။
ပညတ်သွားရာ ဓာတ်သက်ပါ … အမြန်လမ်း အမြန်မောင်းသောအခါ
အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အနေနှင့် ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှုနေရာများကို လမ်းပိုင်းမြေပုံတွင်ထည့်သွင်းအစား ထိုးကြည့်သောအခါ နေရာ မလပ် ပြန့်ကျဲဖြစ် ပွား နေ သည် ကို တွေ့ရသည်ဟုလည်းဆိုသည်။ အမြန်လမ်းတစ်လျှောက် လမ်းကွေ့များရှိ သော်လည်း ထိုလမ်းကွေ့များတွင် ဖြစ်ပွားသည့် ယာဉ်တိမ်းမှောက် မှုထက် လမ်း အဖြောင့် ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည့် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုက ပိုများသည်ကို အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးနှင့် အမြန်လမ်းအင်ဂျင်နီယာများ ပူးပေါင်းပြုလုပ်သည့် တိုင်းတာ သုံးသပ် ချက်များ အရ တွေ့ရသည်ဟု လည်းဆိုသည်။
”အခုဟာက မြန်မြန်မောင်းနိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာအဖြစ်များတာ” ဟု ပြည်သူ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အမြန်လမ်းပြု ပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့အင်ဂျင်နီယာမှူး ကြီးက အဖြစ်များလာသည့်ယာဉ်တိုက်မှု၊ တိမ်းမှောက်မှုများသည် လမ်းဒီဇိုင်း ကြောင့်ဖြစ်ရသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းအပေါ် ၎င်းတို့တွေ့ရှိထားချက်များနှင့် ပြန်လည် တုံ့ပြန်ဖြေ ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
အမြန်လမ်းမကြီးအလယ်တွင် ကွန်ကရစ်တုံးများဖြင့် ကာရံထားသည်ကို အမြန်လမ်းအသုံးပြု၍ ခရီးသွားနေရသူတိုင်း မြင်ဖူးကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကွန်ကရစ်တုံး များအား အရှိန်ပြင်းပြင်းနှင့်သာ ယာဉ်များဝင်တိုက်မိပါက ကားပေါ်ပါလူများ ထိခိုက်သေဆုံးရန် ရာခိုင်နှုန်းများသည်ဟု မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာအရပ်ရပ် ကို လေ့လာ သုံး သပ်နေသူ ဦးသက်ဝင်းက ဆိုသည်။ လမ်းတစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်ကို ကာရံထားသည်က ရေ(သို့မဟုတ်)သဲထည့်ထားသော ပလပ်စတစ်အကာတုံးများသာ ဖြစ်သင့် သည် ဟုလည်းဆိုသည်။ သို့ မှသာ တိုက်မိပါက ၎င်းတို့မှာ လွင့်ထွက်သွားပြီး ယာဉ်နှင့်လူထိခိုက်မှုနည်းမည်ဖြစ်သော်လည်း ယခုအချိန်ထိကာရံထားသည့် လမ်းလယ်မှ ကွန်က ရစ်တုံးများက တစ် ဖက်ယာဉ်ကြောရှိ ယာဉ်နှင့်မျက်နှာချင်း ဆိုင်မတိုက်မိရန် အကာအကွယ်ပြုထား ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်း ယူဆကြောင်း ပြောသည်။ လမ်းလယ်တွင် ကွန်ကရစ်တုံးများ အားအစားထိုးကာရံစေချင်သည့် ဦးသက်ဝင်းက လက်ရှိအဖြစ်အပျက်များအပေါ်တွင် ”ခုတော့တိုက်မိတာနဲ့ ကားက ညက်နေတာပဲ” ဟူ၍ သူ့ထံတွင် ရှိသည့် ဓာတ်ပုံသက်သေတချို့ကို ကိုးကား၍ ဆို သည်။
အမြန်လမ်းအလယ်တွင် ကွန်ကရစ်တုံးများဖြင့် ကာရံထားသည်က မှန်ကန်သည့် အခြေအနေတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လမ်းတည်ဆောက်သည့် အင်ဂျင် နီယာများ အနေနှင့် ထိုကွန်ကရစ်တုံးများကို ထားရှိရခြင်းက တစ်ဖက်ယာဉ် ကြောရှိ ယာဉ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိနိုင်သည့်အခြေအနေကို လျှော့ချခြင်း တစ်ခုတည်းတော့ မ ဟုတ်။ တခြားသော စိတ်ကူးတစ်ခုလည်း ရှိနေပြန်သည်။
၎င်းက ကားများအရှိန်ပြင်းပြင်း အထူးသဖြင့် ၁ဝဝ ကီလိုနှင့်အထက် မောင်းနှင်စဉ် ယာဉ်အန္တရာယ်တွေ့ကြုံ ပါက မတိမ်းမှောက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ”လမ်းလယ်ကွန် ကရစ် တုံးနဲ့ ထိတာနဲ့ကားကရပ်သွားမယ်။ မမှောက်တော့ဘူး။ ကားကမှောက်လို့ လိမ့်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ လူသေလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူမထိဖို့ ချ ထားတာဖြစ်တယ်” ဟု အင်ဂျင် နီယာ မှူးကြီး ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ပြောသည်။လမ်းတည်ဆောက်မှုအင်ဂျင်နီယာအပိုင်းအနေနှင့် လမ်းပေါ်တွင်သွားလာရမည့် ခရီးသည်များ ထိခိုက်သေဆုံးမှု အန္တရာယ် နည်းနိုင်သမျှ နည်းစေရန် စဉ်းစားရပြီး ယင်းအချက်ကြောင့် ထိုကွန်ကရစ်တုံးများကို လမ်းအလယ်တွင် ချထား အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းသိရသည်။ လမ်းလယ်ကျွန်း ကွန်ကရစ်တုံး များအတွက် အသုံးပြုသည်က အပျော့စားကွန်ကရစ်များသာ ဖြစ်သည်။ အချို့က ဆောက်လုပ်ရေးအနေနှင့် ကွန်ကရစ်အညံ့စားများ သုံးသည်ဟုလည်း ဆိုပြန် သည်။ သို့သော် တမင်အားပျော့သည့် ကွန်ကရစ်သုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟု အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးက ရှင်းပြသည်။ ယင်းအခြေ အနေမှာ လူထိခိုက်မှု ကို လျော့ နည်းစေ သော်လည်း ကားအတွက်မှာမူ ထိခိုက်မှု မနည်းလှ။ တိုက်မိသည်နှင့် ကားရှေ့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းခန့် ကြေမွသွားနိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများကိုယ် တိုင်ပင် လည်း ထို အချက်ကို သိသည်ဟုဆိုသည်။ သိရှိ သည်နှင့်အညီ လက်ရှိတွင် ယာဉ်တိမ်း မှောက်မှု မဖြစ်ပွားစေရန်သာမက ယာဉ်အတွက်ပါ ထိခိုက်မှုနည်းနိုင်မည့် အသက် ကယ် တန်းများ (Guard Rail) များကို ကွန်ကရစ်တုံးများအစား ပြောင်းလဲတပ် ဆင်နေပြီဖြစ်သည်။
ကွန်ကရစ်တုံးများနှင့် တစ်ဆက်စပ်တည်းပင် အမြန်လမ်းမကြီးမှာလည်း ကွန်ကရစ်အမျိုးစားဖြစ်နေသည်က အန္တရာယ်ရှိသည့် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ယာဉ်မောင်း အများစုနှင့် မော်တော်ယာဉ်အကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ်ကြသည်။ နေပြည်တော်မြို့တွင်းနှင့်နယ်ဝေးသို့ အိမ်စီးကားအငှားလိုက်သည့် ယာဉ် မောင်း ဦး တင်ဆန်းကမူ ကတ္တရာလမ်းမှာ ယာဉ်မောင်းများအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဦးတင်ဆန်းက အသက် ၅ဝနီးပါးရှိပြီး အသက်ထက်ဝက် ခန့် ကားမောင်းနေခဲ့ရသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ”ကွန်ကရစ်လမ်းက ကြာကြာမောင်းရင် ကားဘီးတာယာပွန်းပြီးကွဲစေတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ထို့ပြင်လမ်းအလယ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် လမ်းကြောင်းပြ ရောင်ပြန်မီးများမှာလည်း ကားဘီးနှင့် ပွတ်တိုက်မိမှုများများစားစားဖြစ်ပွားပါက ပါးလာပြီး အချွန် များဖြစ်ပေါ် ကာ ကားဘီးကို ဒုက္ခပေးနိုင်သည်ဟုလည်း ဆိုပြန်သည်။ ထိုအချက်များက သူ၏ ယာဉ်မောင်းလုပ်သက်တစ်လျှောက် အတွေ့အကြုံများနှင့် ယှဉ်၍ ပြောခြင်း လည်းဖြစ်သည်။
အပူပိုင်းဒေသနှင့် ကွန်ကရစ်လမ်း အမြန်လမ်းအတွက် အဖြေလား
အမြန်လမ်းမကြီးသာမက ဟိုင်းဝေးလမ်းများ ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက လမ်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးသာရှိပြီး ပထမတန်းစားမှာ ကတ္တရာလမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဒုတိယမှာ ကွန် ကရစ်လမ်းဖြစ်သည်ဟု လမ်းတည်ဆောက်မှု အဝေးပြေးလမ်း တည်ဆောက်မှုပုံစံအရ သိရသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံအနှံ့နီးပါးရှိလမ်းများကို ကွန်ကရစ်အမျိုး အစား သုံးထားသော်လည်း လမ်းကြောင့် ယာဉ်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ယင်းမှာ အအေးပိုင်းဒေသများတွင် တည်ရှိထားခြင်း ဟူ၍လည်း သုံး သပ်ကြသည်။ အမေရိကန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင်လည်း ကွန်ကရစ်လမ်းကို အသုံး ပြုမှုများ ရှိသည်။
ကွန်ကရစ်အမျိုးအစားသည် အအေးပိုင်းဒေသများအတွက် သင့်လျော်ပြီး အပူပိုင်းဒေသများအတွက်ဆိုပါက သင့်လျော်မှုမရှိကြောင်း၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင် လည်း ကွန်ကရစ်လမ်းအသုံးပြုမှုနည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအခြေအနေကို အမြန်လမ်းတည်ဆောက်သည့် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်နည်း ပညာတက္က သိုလ်မဟာတန်းမှ ကျောင်းသားများနှင့် ပူးပေါင်း၍ သုတေသနတစ်ခုပြုလုပ်ထားသည်ဟုလည်း အမြန်လမ်းအင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးက ဆိုသည်။ အမြန်လမ်းနှင့် ကွန် ကရစ်သင့်လျော်မှု ရှိမရှိကို လေ့လာနေခြင်းဖြစ်၍ လက်ရှိတွင်အသုံးပြုထားသည်က အလုံးစုံမှားယွင်းမှု ဖြစ်သည်၊ မဖြစ်သည်ကိုမူ ပြောပြရန် ခက် ခဲသေး ကြောင်း လည်း ရှင်းပြသည်။
ကွန်ကရစ်၏ အပူချိန်တိုးတက်မြင့်မားမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကားဘီးတာယာများ ပွတ်တိုက်ကွဲထွက်နိုင်ကြောင်း သိရှိထားသော်လည်း အပူပိုင်းဒေသဖြစ်သည့် အိန္ဒိ ယရှိ ယမုံနာဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီးကို ကွန်ကရစ်နှင့်သာ တည်ဆောက်ထားပြီး ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းကဲ့သို့ သေဆုံးမှု၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု မရှိခြင်းကလည်း စဉ်း စားစရာ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ”တိကျတဲ့အဖြေတစ်ခု ထွက်အောင်တော့ ပညာရှင်တွေစုစည်းပြီး သုတေသနလုပ်နေပါတယ်။ အဖြေတခုရတယ်ဆိုတာနဲ့ ဒီကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက် ရမှာပါ” ဟု ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ပြောကြားသည်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ် တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပွားမှု ၂၅၉ မှုရှိခဲ့ကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။ ထိုအမှုများကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၁၂ ဦးအထိရှိခဲ့ သည်။ ၎င်းကိုပျမ်းမျှ တွက်ကြည့်ပါက တစ်လလျှင် ယာဉ်မတော်တဆမှု ၂၁မှုဟု အကြမ်းဖျင်းဆို နိုင်သည်။ အမြန်လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ တင်ပြချက် အရ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မေလ၊ ဇူလိုင်လနှင့် နိုဝင်ဘာလများတွင် ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား ပြန်လည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားမှုအရ မိုးတွင်းကာလလေးလအတွင်း ယာဉ် မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး၏ ၄ဝ ရာ ခိုင်နှုန်းဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ထို့ပြင်ခရီးသွားရာသီများတွင်လည်း ယာဉ်တိုက်မှုမြင့်တက်သည့် သဘောတရားရှိရာ ၂ဝ၁၃ခုနှစ်သင်္ကြန်တွင်းတွင် ယာဉ်အစီးရေ ၇၂၂၇၉ ဖြတ်သန်းသွား ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် သင်္ကြန်တွင်လည်း အစီး ရေပေါင်း ၉၇၃၄၇ ဖြတ်သန်းခဲ့ရာ ယခင် နှစ်ထက် ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ၂ ဒသမ ၅ဆ တိုးတက်လာခဲ့သည်ဟု ပြည် သူ့ဆောက် လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အမြန်လမ်းအဖွဲ့၏စာရင်းဇယားများအရ သိရ သည်။
စကားကျွံလျှင် နှုတ်မရ ကားအရှိန်လွန်တော့ . . .
ယခင်နှစ် တစ်နှစ်လုံးစာ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပွားရသည့်အခြေအနေကို မည်သည့်အကြောင်းအရာကြောင့် ဖြစ်ပွားရကြောင်းပြန်လည် အနှစ်ချုပ်သုံး သပ်ချက်ပြုရာတွင် အရှိန်လွန်မောင်းနှင် ခြင်းကြောင့် မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားရ ခြင်းက ၁၃၇ မှု၊ တာယာကွဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားမှုက ၇ဝမှုဖြင့် အမြင့်မားဆုံးဖြစ် နေသည်ကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိ ရသည်။ အရှိန်လွန်မောင်းနှင်မှုကြောင့်ဖြစ် ပွားရသည့် မတော်တဆမှုမှာအများဆုံး ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရခြင်းကြောင့် ယာဉ်မောင်းများအနေနှင့် အမြန်လမ်း ပေါ် တွင် မောင်းနှင်ရာ၌ အရှိန်ကို ကီ လို၁ဝဝနှင့် မောင်းနှင်ခြင်း ပြု၊ မပြုဆို သည်က အဓိက ဖြစ်လာပြန်သည်။
အမြန်လမ်းပေါ်မောင်းနှင်ရာတွင် အိမ်စီးကားသေးများအတွက် တစ်နာရီ လျှင် မိုင် ၁ဝဝ နှုန်းထက် မပိုရန်နှင့် ခရီး သည်တင်ယာဉ် ကားကြီးများအတွက် တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၈ဝထက်ပို၍ မောင်း နှင်ခြင်းမပြုရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန အမြန်လမ်းအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အ နေနှင့် အကြံပြုသတိပေးထားသည်။ ”အမြန်လမ်းပေါ်မှာ ဒီလောက်နှု န်း လေးတောင် ကျော်မောင်းလို့မရဘူးလားလို့ပြောကြတယ်။ မောင်းလို့ရပါတယ်။ မရဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေ မဲ့ ၁ဝဝ ကီလိုဆိုတာ တကယ်တော့ ထိန်း လို့လွယ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ပြော ထားတာပါ” ဟု အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ပြောပြသည်။
ကားတစ်စီး၏ တစ်နာရီအသွားနှုန်း ကီလိုတစ်ရာအား အချိုးချကြည့်မည်ဆို ပါက တစ်စက္ကန့်လျှင် ၈၈ ပေသွားနေပြီး တနည်းအားဖြင့် တစ်မိနစ်လျှင် တစ်မိုင်နှုန်း သွားနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု မော်တော် ယာဉ်နည်းပညာ အကြောင်းလေ့လာ သုံးသပ်သူ ဦးသက်ဝင်းကဆိုသည်။ အလုံပိတ်ထားသည့် လေအိတ်အဲ ယားကွန်း ကားများ အနေနှင့် ပြင်ပလေ တိုက်နှုန်းကို မသိရှိနိုင်တော့သည့်အတွက် နင်းလျှင်နင်းသလောက် မိုင်တက်လာနိုင်ပြီး ရုတ်တရက် အန္တရာယ်နှင့် ကြုံတွေ့ လာနိုင်သည်ဖြစ်ရာ အထူး သတိထား သင့်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။
”ပုံမှန်လေးသာမောင်းမယ် ဆိုရင် တော့ ဘာအန္တရာယ်မှ မဖြစ်ပါဘူးဗျာ” ဟု ဦးသက်ဝင်းက ပြောသည်။ ရန်ကုန်-မန္တလေး ပြေးဆွဲနေသည့် မှန်လုံအမြန်ယာဉ်မောင်းနှင်သူ ဦးကို ဆန်းကမူ ”ကျွန်တော်တို့ကတော့ မိုင်း လစ်ဒိုင်ခွက်ကို ကြည့်မောင်းတာပါပဲ။ အဲ့ ဒီတော့ မြန်ရင်မြန်မှန်းသိလာတယ်။ ကား က တစ်ရာကျော်လာပြီဆိုရင် သိသာပါ တယ်” ဟု ဆိုသည်။ အရှိန်လွန် မောင်းနှင်ခြင်းကြောင့်ပင် တာယာကွဲထွက်ခြင်းကိစ္စက တစ် ဆက်စပ်တည်း ကပ်ပါလာခြင်းဖြစ်သည် ဟုလည်း အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့၏ တင်ပြ ချက်အရသိရသည်။ ထို့ပြင် ယာဉ်မောင်းများ အိပ်ငိုက်မှု ကြောင့်လည်း၂ဝ၁၃ခုနှစ်တွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှု ၁၅မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၎င်းအချက်သည်လည်း အမြန် လမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင်ကြမည့် ယာဉ်မောင်းအများစု သတိပိုမိုထားရှိသင့်သည့် အချက်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
မြန်မြန်မောင်း များများမှောက် … မြန်မြန်သွား … များများကယ်
တစ်နေ့တာလုံးအား နှစ်နာရီခြား လျှင် တစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့် စာရင်းပြုစုကြည့်ရာ ယာဉ်မတော်တဆမှုများ၏ ၅ဝ ရာ ခိုင်နှုန်းမှာ နံနက် ၄ နာရီမှ ၈နာရီကြား တွင် လည်းကောင်း၊ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ည၆နာရီအတွင်း၌ လည်းကောင်း ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ အမြန်လမ်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၏ အကြမ်း ဖျင်းသုံးသပ်ချက်များအရ ယင်းအချိန်များသည် ယာဉ်မောင်းများ အိပ်ငိုက်နိုင်သည့် အချိန်ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ ရပြန်သည်။ ထပ်မံ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလျှင် နံနက် ပိုင်း တွင်ဖြစ်ပွားသည့် မတော်တဆမှုက နေ့လယ်ပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်းထက် သေဆုံးမှုထက်ပိုများနေသည်ကိုလည်း ကောက်ချက်ချနိုင်ခဲ့ကြရာ အရေးပေါ် ကယ် ဆယ်ရေး အချိန်မီမှုမရှိခြင်းနှင့် ကယ် ဆယ်ရေး ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည့် နေရာများ သို့ သတင်း မရောက်ရှိခြင်းများ ဖြစ်နိုင် သည်ဟု သုံးသပ်ထားကြောင်း ဦးကြည် ဇော်မြင့် က ပြော သည်။
”ခုတော့ သတင်းရတာနဲ့ နာရီဝက်အတွင်းသွားကယ်နိုင်ဖို့ အမြန်လမ်းအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီလေးကို အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့တွေရယ်၊ အမြန်လမ်းရဲ တပ်ဖွဲ့ရယ်၊ မီး သတ်၊ ကြက်ခြေနီရယ်နဲ့ ဖွဲ့ထားတယ်” ဟု ၎င်းကပြောကြားသည်။ ၎င်းကော်မတီက ကားဆွဲရန် ထရပ်ကားတစ်စီး၊ လူနာတင်ယာဉ်တစ်စီး၊ မီး သတ်ယာဉ်တစ်စီး၊ အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ ကားတစ်စီးနှင့် လမ်းအုပ်ချုပ်သူအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့မှ ကားတစ်စီး စုစုပေါင်းကား ငါးစီးဖြင့် အချိန်ပြည့် စောင့်ဆိုင်းပေး ထားပြီဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရ သည်။ ထိုအဖွဲ့ကို ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်အကြောင်းကြားပေးရန်တော့ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
သင်သည် အမြန်လမ်းပေါ် ခရီး သွားရင်း အမှတ်မထင် ယာဉ်မတော် တဆမှုတစ်ခုနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားသူများ ဖြစ်ပွားနေသည်ကို မြင် တွေ့ရသည်ဖြစ်စေ မကြာမီထုတ်ပြန်ပေး ရန်ရှိသည့် အမြန်လမ်းအရေးပေါ်ကော်မ တီအဖွဲ့ထံသို့ သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းမှတစ် ဆင့် ဆက်သွယ်ပေးရန် မမေ့စေလိုပေ။ ထို့ပြင် အမြန်လမ်းပေါ် တွင်မောင်း နှင်သွားလာကြမည့် ယာဉ်မောင်းများ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် ၁၆ ချက်ကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည် သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ချ မှတ်ပေးထားသည်။ ယင်းအချက်များတွင် ယာဉ်လမ်းကြော အသုံးပြုပုံစနစ်များ၊ အ မြန်လမ်းမပေါ်တွင် ယာဉ်ရပ်နားလိုပါက မည်ကဲ့သို့ ရပ်နားသင့်ကြောင်း အသိပေး ချက်များနှင့် ယာဉ်မောင်းစဉ် အရက် သောက်ခြင်း၊ ပေါ့ဆစွာမောင်းနှင်ခြင်း မပြုရန် စသည့်တို့ကို အဓိက သတ်မှတ် ပေးထားသည်။ သို့သော် ယင်းအချက် များကို ကျူး လွန်ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် ယာဉ်မတော်တဆမှု ၁၂ မှု ယမန်နှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အခြားဖြစ်သည့် လမ်းချော်ခြင်း၊ ဝါ ယာရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ရုတ် တရက်ကွေ့ခြင်းနှင့် လမ်းပေါ်တွင်သွား လာသည့် လူ၊တိရစ္ဆာန်များကြောင့် ဖြစ် ပွားရမှုများမှာ အ ထက်ပါအချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နည်းပါးနေသည်ကို လေ့ လာတွေ့ရှိရသည်။ ယင်းကိစ္စများကို လမ်းအင်ဂျင်နီ ယာအဖွဲ့အနေနှင့် အနီးကပ်စောင့်ကြည့် ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာပေးခြင်း၊ အသိပေးခြင်းများဖြင့်သာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ကာလတစ် ခုပြီးပါက ယာဉ်မောင်းများ အနေနှင့် စည်းကမ်းကို စနစ်တကျ လိုက်နာကျင့် သုံးရန်လိုအပ်မည်ဟုလည်း အင်ဂျင်နီယာမှူး ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ဆိုသည်။
မုန့်ကျွေး၍မရ တုတ်ပေးမှသာရမည်လော . . .
သို့သော် ပြည်တွင်းတွင် ပညာပေးသည့်လုပ်ငန်းမှာ တွင်ကျယ်မှုမရှိကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ရယ်မောရင်းဆို သည်။ ၎င်းတို့အနေနှင့် ဆီးဂိမ်းကာလတွင်း အရက်သေ စာသောက်စားမှု ရှိ မရှိတိုင်းတာခြင်းများ၊ ခါးပတ်ပတ်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ဆီးဂိမ်းအပြီးတွင် ယာဉ်မောင်းများ၊ ခရီးသည်များမှာ ယခင် အတိုင်းပင် သွားလာမြဲ ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။ ”ခါးပတ်ပတ်ထားပါခင်ဗျာလို့ ပြောတာကို ဘုကြည့်ကြည့်ခံရတယ်လေ” ဟု အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးက စည်းကမ်း နှင့် ပတ် သက်၍ ကြုံတွေ့နေရသည့် အ ခြေအနေကို ပြောပြသည်။
ထို့ကြောင့်ပင် မလိုက်နာလိုပါကလည်း အဆင်ပြေပါသည်ဟူသော စည်းကမ်းထက် တိကျသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ပြစ် ဒဏ်များ၊ စည်းကမ်းများပါဝင်မည့် အမြန် လမ်းမကြီးများ ဥပဒေကို ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းမည် ဖြစ်သည်ဟုလည်း ၎င်းတို့က ဆိုကြသည်။ အဆိုပါဥပဒေကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအောက်ရှိ အမြန် လမ်းအင်ဂျင်နီ ယာအဖွဲ့မှ ရေးဆွဲနေပြီး ပြည်ထောင်စု တရားရုံးချုပ်သို့ တင်ပြကာ သဘောထား မှတ်ချက်တောင်းခံနေပြီဖြစ်သည်။ ထို့ နောက် ယခုလ (မေလ)တွင် ပြန် လည် ကျင်းပမည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပုံမှန်အ စည်းအဝေးသို့ တင်ပို့နိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟုလည်း သိရသည်။
ဥပဒေဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းရန်စီစဉ်ရခြင်း ကိုမူ ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ”တကယ်တော့ ထိန်းရင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာက ပညာပေးတာကို မကြိုက်ကြဘူး။ ဥပဒေနဲ့ ချုပ် ကိုင်မှာကိုပဲ ကြိုက်ကြတယ်” ဟူ၍ သုံးသပ်လိုက်သည်။ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး အား တာဝန်ယူဖောက်လုပ်ခဲ့သည့် အင် ဂျင်နီယာအဖွဲ့က ၎င်းလမ်းနှင့်ပတ်သတ် ၍ အခြေ အနေတစ်ခုကိုလည်း အမှန်အ တိုင်းဝန်ခံသည်။ ၎င်းက ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားသည့် ယင်းအမြန်လမ်းမကြီးမှာ အမြန်လမ်းတစ် ခုတွင်ရှိ သင့် သည့် အင်္ဂါရပ် မပြည့်စုံသေး ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အမြန်လမ်းမကြီးတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာရန်လိုအပ်ချက်ရှိနေ၍သာ အမြန်လမ်းကြီးဟု အမည်တပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပြီး အမှန်ဆိုရလျှင် ဟိုင်းဝေးလမ်းတစ်ခုအ နေနှင့်သာ အသုံးပြုနိုင်သေးကြောင်း ပြောကြားသည်။ ”မြန်မြန်ပဲမောင်းလို့ရတာ။ မြန်မြန်ကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း မောင်းလို့ရအောင် ကျွန်တော်တို့ အပြည့်အဝ ထိန်း ချုပ်သွားလာ ခွင့်ပေးတဲ့စနစ် မလုပ်ပေး နိုင်သေးဘူး” ဟု အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးက ဖြေကြားသည်။
ထိုအခြေအနေတွင် အသုံးပြု၍ မရသေးပါက အမြန်လမ်းအဖြစ် အသုံးပြုခွင့်မပေးသင့်ကြောင်း ပြန်လည်ထောက်ပြမှုများလည်း ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ရာ ဦးကြည် ဇော်မြင့်ကမူ
ခေတ်တစ်ခေတ်၏လိုအပ်ချက်နှင့် အခြေအနေကြောင့် အသုံးပြုခွင့် ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့ သော်လည်း လုံးဝဥဿုံ အဆင့်မမီခြင်း တော့မဟုတ်။ တဖြည်းဖြည်းချင်းနှင့်ပင် အမြန်လမ်းမကြီး၏ အင်္ဂါနှင့်ညီညွတ်စေရန် ပြုလုပ်နေသည်ဟုလည်းသိရသည်။
သို့သော် ယင်းအမြန်လမ်းမကြီး တစ်ခုလုံးအား အပြည့်အဝအဆင့်အတန်း မြှင့်လိုက်ရန်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ထိုကုန်ကျစရိတ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ပူ တာအိုမှ တောင် ပိုင်းကော့သောင်းမြို့အ ထိ ၂၄ပေအကျယ် ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီး တစ်ခု ဖောက်လုပ်လိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အမြန်လမ်း အင်ဂျင်နီယာ အဖွဲ့အ နေနှင့် လမ်း အဆင့်မြှင့်ခြင်းကို ပြုလုပ်ချင် သော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ”လုပ်နိုင် တာတွေကို အကုန်လုပ်လို့တော့မရဘူးလေ။ လိုအပ်တာနဲ့ လုပ်သင့်တာနဲ့ကို ချိန် ညှိရမှာပေါ့” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တစ်နှစ် ထက်တစ်နှစ် ယာဉ်မတော်တဆမှုများများပြားလာသည်က သံသယရှိဖွယ် အခြေအနေ မဟုတ်တော့။ လူသေဆုံးမှုများ နှင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိမှုများက ရာနှင့် ချီသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် အမြန်လမ်း ၏ အားနည်းချက်များကြောင်း ဖြစ်ပွား ခဲ့ရသည့် မတော်တဆမှုများလည်းရှိသည်။ ယာဉ်မောင်းသူ များ၏ ပေါ့ဆမှုများ၊ စည်း ကမ်းလိုက်နာမှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှုများလည်းရှိသည်။ ထို့ပြင် ယာဉ်များ၏ ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းခြင်း၊ အ ရေးပေါ်အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် မည်သို့ပြုလုပ်သင့်သည်ကို ကြိုတင်ပြင် ဆင်ထားမှုမရှိခြင်းနှင့် ခရီးသည်များ၏ ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်မှုပြုလုပ်ထားရန် အသိ နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ယာဉ် တိမ်းမှောက် မှု၊ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပါက သေဆုံးရသူ ဦး ရေတိုးပွားလာသည်ကိုလည်း တစ်နေ့ တခြား မြင်တွေ့လာရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ယင်းအခြေအနေအတွက် ရန်ကုန်-မန္တ လေး အမြန်လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး ဦးကြည်ဇော်မြင့် က ”လူတွေရဲ့ ခံယူချက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ပြဿနာဖြစ်ရင် ယာဉ်မောင်း ကြောင့် လမ်းကြောင့် အပြစ်တင်လက်ညှိုး ထိုးနေမယ့်အစား အားလုံးမှာတာဝန်ယူတဲ့စိတ်ရှိထားဖို့ပဲလိုတာပါ။ ကျွန်တော် တို့လမ်းပိုင်းကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ကိစ္စတွေ အတွက်တော့ ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော် တို့မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ကျပ်ငွေ ၁၂ ဘီလီယံကျော် အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ရန်ကုန်တွင်ရေလျှံ
6/13/2014 05:46:00 PM Myanmar-news
ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမတွင် ကားလမ်းပိတ်ဆို့နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ကျော်ဇင်သန်း)
ရန်ကုန်မြို့တွင် ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ကျပ်ငွေ ၁၂ ဘီလီယံကျော် အကုန်အကျ ခံ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အစိုးရ က ကြေညာထားသော်လည်း ဇွန် လ ၁၂ ရက် နံနက်က ရွာသွန်းခဲ့ သည့် မိုးကြောင့် ရန်ကုန်မြို့အနှံ့ ရေနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။
ရေကြီးရေမြုပ်မှုများကြောင့် လမ်းများပိတ်ဆို့ခြင်း၊ လူနေရပ် ကွက်အချို့တွင် ရေများလွှမ်းသွား ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းအချို့ ပိတ် ခဲ့ရခြင်း၊ ဘတ်စ်ကား၊ မီးရထား ကဲ့သို့သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်များ နှောင့်နှေးရပ်တန့်သွား ခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၁၂ ရက် နံနက်အစောပိုင်းကတည်းက သဲသဲမဲမဲ ရွာသွန်းခဲ့သော မိုးသည် ရုံးတက် ချိန် နံနက် ၈ နာရီခန့်အထိ ဆက် လက် ရွာသွန်းနေသောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့လူနေရပ်ကွက်များ၊ လမ်းမများပေါ်တွင် ရေများဖုံး လွှမ်းနေခဲ့သည်။
အမှိုက်သရိုက်များနှင့် မိုးရေ များ ဖုံးလွှမ်းနေသည့် ရန်ကုန်မြို့ ၏ လမ်းမများထက်တွင် ထောင် နှင့်ချီသည့် မော်တော်ယာဉ်များ ပိတ်မိခဲ့ရသည်။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် တက္ကစီများနှင့် ဘတ်စ်ကားလိုင်းအချို့ ပြေးဆွဲမှု ကို ရပ်တန့်လိုက်၍မြို့တွင်းခရီး သွားများ အခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရ သည်။
‘‘ခဝဲခြံမှတ်တိုင်ကနေ စပိတ် တာ မြို့ထဲ စံပြရောက်မှပဲ ကား လမ်းက ပွင့်တော့တယ်။ အရင် နာရီဝက်လောက်သွားရတဲ့ ခရီးက အခုသုံးနာရီလောက်ကြာတယ်’’ဟု ဗိုလ်တထောင်စေတီတော်မှ လှိုင်သာယာနှင့် ရွှေပြည်သာတို့သို့ပြေးဆွဲနေသည့် ၁၂၄ ယာဉ်လိုင်းမှယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရုံးတက်ချိန်၌ လမ်းမများ ပေါ် တွင် ဘတ်စ်ကားများလည်း ပိတ်မိနေသည့်အပြင် တက္ကစီများနှင့် ဘတ်စ်ကားလိုင်းအချို့ ပြေးဆွဲ မှု ရပ်တန့်လိုက်သောကြောင့် မှတ် တိုင်များတွင် လူများပြည့်နှက်လျက်ရှိသည်။
ယခင်နေ့များက ကားများ တိုးမပေါက်အောင် ပိတ်ဆို့နေ သည့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဆူးလေနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်မူ ကားများ ရှင်းလင်းလျက်ရှိပြီး အငှားယာဉ် နှင့် ဘတ်စ်ကားများ နည်းပါးမှု ကြောင့် ရုံးဆင်း၊ ရုံးတက်သူများ သွားလာရေး အခက်အခဲဖြစ် လျက်ရှိသည်။
‘‘လိုင်းကားကရှားလွန်းလို့ တက္ကစီငှားတာတောင် တောင် ဥက္ကလာဘက်ဆို ဘယ်သူမှ မလိုက်ကြဘူး’’ဟု ဆူးလေမှတ် တိုင်မှ တောင်ဥက္ကလာပသို့ သွားမည့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ဒေါ်အေး အေးမော်က ပြောသည်။
အလားတူ မြို့ပတ်ရထားလမ်းနေရာအချို့တွင် ရေကျော် ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရထားအချိန်များသည်လည်း သတ်မှတ်ချိန်ထက် အနည်းငယ် နောက်ကျ ပြေးဆွဲခဲ့ရကြောင်း ရထားစီးခရီးသည်များက ပြောသည်။ ရထားလမ်းများတွင် ရေကျော်မှုများ ဖြစ်ပွားနေသော်လည်းရထားခရီးစဉ်များကို ပုံမှန် ပြေးဆွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း မြန်မာ့မီးရထားမှ တာဝန်ကျ အရာရှိကပြောသည်။
မိုးရေနစ်မြုပ်မှုကြောင့် စာ သင်ကျောင်းအချို့လည်း ယာယီ ပိတ်ခဲ့ရပြီး ကျောင်းသားများကို သတ်မှတ်ချိန်ထက် စောကာ ကျောင်းဆင်းပေးခဲ့ရသည်။
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှု ကြောင့် လှိုင်မြို့နယ် အလက(၇)ကျောင်းများအတွင်း ရေကြီးရေ လျှံခဲ့ပြီး ရေဝင်သော အခန်းများ မှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ကို နေအိမ်သို့ ပြန်လွှတ်ခဲ့ရကာ နေ့တစ်ဝက်လာတက်မည့် သူငယ်တန်းမှ ဒုတိယတန်းအထိကျောင်း ပိတ်လိုက်ရကြောင်း တာဝန်ကျ ဆရာမတစ်ဦးက ပြောသည်။
‘‘အခန်းထဲအထိ ရေတွေဝင် လာတယ်။ နှစ်တိုင်း ရေကြီးပေ မယ့် အဲဒီလောက်မဆိုးဘူး။ အ ခန်းတံခါးတွေ ပိတ်ပြီး စာသင်နေ တာတောင် ရေတွေက အပေါက် ကနေ တိုးဝင်လာတာ။ မြွေပါး ကင်းပါးလည်းစိုးရိမ်တယ်။ မနက် က နေ့လယ် ၁၂ နာရီအထိ ကျောင်းတက်တဲ့ ငါးတန်း၊ ခြောက်တန်း ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကို စာမသင်နိုင်ဘဲ ထားလိုက်ရ တယ်။ နေ့ခင်းလာတက်မယ့် သူ ငယ်တန်းက နှစ်တန်းကိုတော့ ပိတ်လိုက်ရတယ်’’ဟု အလက(၇)ကျောင်းမှ တာဝန်ကျဆရာမတစ် ဦးက ပြောသည်။
အလားတူ သာကေတမြို့ နယ် ၁/အနော်မာရပ်ကွက်ရှိ အမက(၁၇)ကျောင်း၊ ၃/ရန်ပြေ ရပ်ကွက်ရှိ အမက(၃၉)ကျောင်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် (၂၀)ရပ် ကွက်ရှိ အလက(၈)ကျောင်းနှင့် အမှတ်(၁၈)ရပ်ကွက်ရှိ အလက (၁၂)ကျောင်းများတွင် စာသင်ခန်းများအတွင်းသို့ ရေအနည်းငယ် ဝင်ရောက်ခဲ့သဖြင့် စာသင်ချိန် နေ့တစ်ဝက်ခန့် သင်ကြားခဲ့ပြီး အချိန် စော၍ ကျောင်းဆင်းပေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။ အလားတူ မြို့နယ် ရှစ်မြို့နယ်ရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းပေါင်း ၃၂ ကျောင်းအား ယာယီပိတ်လိုက်ရကြောင်း သိရ သည်။
မိုးမကျမီ ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက လုပ်ဆောင်ခဲ့သော် လည်း အမှန်တကယ် မိုးရွာသွန်း သောအခါ လူနေရပ်ကွက်အချို့ တွင် ရေများနစ်မြုပ်ခဲ့သည်။
ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့ နယ်၊ (၁၀၆)ရပ်ကွက်တွင် ရေအ နက်လေးပေခန့်အထိ မြင့်တက်ခဲ့ ရာ ယင်းရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ် (၅၀) လုံးမှာ ကြမ်းခင်းများ နစ်မြုပ်ခဲ့ ကြောင်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် (၁) ရပ်ကွက်တွင် ရေအမြင့်နှစ်ပေခန့် အထိ မြင့်တက်ခဲ့ရာ အိမ်ခြေ ၁၈၀မှာ ရေဝင်ပြီး နစ်မြုပ်ခဲ့ ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ အများအပြားတည်ရှိရာ တာမွေမြို့နယ်တွင်လည်း မြေညီထပ်များတွင် ရေများဝင်ရောက်လျက်ရှိကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်။ တာမွေနှင့် မြို့တွင်းဆက်သွယ်ထားသည့် အဓိက လမ်းများပေါ်တွင် ရေများဝင်ရောက်နေမှု ကြောင့် လမ်းများပိတ်ဆို့လျက်ရှိ သည်။
‘‘မြေညီထပ်တွေက ရေတွေ ဝင်လို့ အရေးပေါ်ကာတာတွေ လုပ်နေရတယ်။ အဓိက,ကတော့ လမ်းတွေကို ရေဝင်ရေထွက် ပေါက်မပေးဘဲ ကွန်ကရစ်ခင်း လိုက်လို့ ထင်တယ်။ လမ်းက ကောင်းသွားပေမယ့် ရေက မဆင်းတော့ဘူး’’ဟု တာမွေကျောက် မြောင်းကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက် နေ ဦးအောင်ကျော်ကျော်က ပြောသည်။
တာမွေမြို့နယ်အတွင်း အ ချက်အချာကျသည့် သမိန်ဗရမ်း လမ်းမပေါ်နှင့် တာမွေအဝိုင်းထိပ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ယုဇနပလာဇာအနီးတွင်လည်း ရေများ ခါးလယ်ခန့်အထိ ရောက်ရှိခဲ့ သည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်း လမ်းမများ သာမက မြောက်ဥက္ကလာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ စသည့်မြို့နယ်များတွင်လည်း လူနေရပ်ကွက်များ၊ လမ်းမများပေါ်တွင် ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
‘‘မြောက်ဥက္ကလာကို သွား တဲ့လမ်းတစ်လျှောက် ကားတန်း က ပိတ်နေတာ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးကနေ ခရီးသွားမယ့်သူ တွေ ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူး။ ကားလွတ်သွားတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်’’ဟု အငှားယာဉ်မောင်း ဦး မျိုးအောင်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းမ တစ် လျှောက်တွင်လည်း ရှစ်မိုင်လမ်း ဆုံမှ မြို့တွင်းအထိ ရာနှင့်ချီသော ကားများ လမ်းမများပေါ်တွင် ပိတ်ဆို့နေခဲ့သည်။ မော်တော်ယာဉ် များသည် ပြည်လမ်းမပေါ်တွင် ရှစ်မိုင်မီးပွိုင့်၊ အေဒီလမ်းမီးပွိုင့် တစ်လျှောက်ကားများသွား မရ အောင် ပိတ်ဆို့နေခဲ့သည်။ အ သစ် တည်ဆောက်ထားသည့် လှည်းတန်းခုံးကျော်တံတားပေါ် တွင်လည်း ယာဉ်ပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ် ပွားခဲ့ပြီး ယင်းနေရာမှ ဗိုလ်ချုပ် လမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်အထိ သုံးမိုင်ခန့် လမ်းများပိတ်ဆို့နေခဲ့ သည်။
ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမ တစ်လျှောက်တွင်လည်း ကားများ ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် သမိုင်းလမ်းဆုံတွင် ရေကြီးနေမှု ကြောင့် ခဝဲခြံမှတ်တိုင်မှ သမိုင်း လမ်းစုံအလွန်အထိ ၁၀ မိနစ်ခန့် ခရီးကို တစ်နာရီခွဲခန့်ကြာသည် အထိ ကားများပိတ်ဆို့နေကြောင်း ယင်းနေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့် 7Day သတင်းထောက်က သတင်း ပေးပို့သည်။
သမိုင်းလမ်းဆုံမီးပွိုင့်အနီးရှိ မြေနိမ့်ရပ်ကွက်များတွင် ရေ မြောင်းရေလျှံမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ကားလမ်းပိတ်၍ ယာဉ်ကြောကျပ် တည်းမှုများ ကြုံခဲ့ရသည်။ မြို့ထဲ မှ အင်းစိန်မြို့နယ်သို့ ထွက်ခွာ မည့် အငှားယာဉ်လိုင်းများနှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များသည် ဘုရား လမ်းမီးပွိုင့် ပါရမီလမ်းအတိုင်းချိုး ၍ ဖြတ်လမ်းမှတစ်ဆင့် သွားလာ ခဲ့ရသည်။ ဗဟိုလမ်းနှင့် ပါရမီ လမ်းထောင့်ရှိ လမ်းများတွင် ဒူး ခေါင်းအထိ ရေများတက်ခဲ့ပြီး ကားများ တစ်ရွေ့ချင်းစီ ဖြည်း ဖြည်းမောင်းနှင်နေရသည်။
‘‘သမိုင်းကိုမသွားရဲဘူး။ ရေ ကြီးတာ အရမ်းများတယ်။ ကား ဘော်ဒီတွေ ရေနဲ့ထိလို့ အဲဒီနား မှာ ပျက်နေတာ အများကြီးပဲ’’ဟု အငှားယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ပြောသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် တွင်လည်း ရေဝင်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး အဓိကလမ်းမ ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် သစ္စာလမ်းမ ပေါ်တွင် သုံးပေကျော်ခန့်အထိ ရေတက်နေ၍ လူများနှင့် မော် တော်ယာဉ်များ ခက်ခဲစွာသွားလာနေရကြောင်း ယင်းနေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့် 7Day သတင်း ထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ထို့အပြင် ဗဟန်းမြို့နယ် အ လယ်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက် ခြောက် ထပ်ကြီး ရွှေသာလျောင်းဘုရား အရှေ့ဘက်မုခ်စင်္ကြံန်လမ်း အ လျား ပေ(၄၀)၊ အနံ(၁၇)ပေ၊ အ မြင့် (၁၂)ပေရှိ အင်္ဂတေလျှောက် လမ်းမှာ မြေသားအိကျသွားမှု ကြောင့် ကွဲအက်သွားပြီး စင်္ကြံန် လမ်းအနီးရှိ ကွန်ပျူတာဆိုင် နောက်ကျောနံရံမှာ ပြိုကျခဲ့ ကြောင်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် (၈) ရပ်ကွက် သရဖီလမ်းနှင့် စံပယ်လမ်း ထောင့်ရှိ နေအိမ်ရှေ့တွင် ကာရံ ထားသော အရှည်ပေ(၅၀)၊ အမြင့်(၆)ပေခန့်ရှိ ခြံစည်းရိုးအုတ်တံ တိုင်းမှာ ခြံဝင်းအတွင်းဘက်သို့ ပြိုကျသွားကြောင်း၊ ယင်းသို့ ပြိုကျခဲ့မှုများကြောင့် လူထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုမရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ တပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ရန်ကုန်မြို့အနှံ့ ရေကြီးမှု များ ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း လူများ ရွှေ့ပြောင်းပေးရသည်အထိ အခြေအနေဆိုးရွားမှု မရှိကြောင်း ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည့် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ကျအရာရှိက ပြောသည်။
အာရေဗျပင်လယ်တွင် ဖြစ် ပေါ်နေသော မုန်တိုင်းကြောင့် မုတ်သုံလေ အားကောင်းကာ မိုး သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ ရန်ကုန်၊ ပဲခူးနှင့်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးရွာသွန်းမှု များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထား သည်။
6/09/2014 08:01:00 AM Myanmar-news
၈.၆.၂ဝ၁၄ ရက်နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ နံနက် (၇းဝဝ) နာရီအချိန်မှ စတင်၍ ၄၂ ရပ်ကွက်၊ ဇော်ဂျီလမ်းတစ် လျှောက်သို့ အမှိုက်ကောက်ရန် ထွက်ခွာခဲ့ပါ သည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အလုပ်အမှုဆောင် များနှင့် အသင်းသား/သူများတို့သည် သွားရောက်၍ ရပ်ကွက်သူ/သားများ၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မာဃ လုလင် နာရေးကူညီမှု အသင်းမှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ တနင်္ဂနွေ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ကျောင်း တော်မှ ကလေးငယ်များ အပါအဝင် တက်ညီလက်ညီဖြင့် ပရဟိတ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အင်တိုက်အားတိုက် စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ၄၂ ရပ်ကွက်၊ ဇော်ဂျီလမ်း အား ဦးစွာပထမအနေဖြင့် အမှိုက်ကင်းမစင်ဇုံ ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် အမှိုက်ကောက် ခြင်းနှင့် စနစ်တကျ အမှိုက်များစွန့်ပစ်နိုင်ရန် သတ်မှတ်အမှိုက်ပုံး သုံးမျိုးသုံးစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားသည့် (အမှိုက်စို၊ အမှိုက်ခြောက်နှင့် ပြန်သုံးနိုင်သောအမှိုက်) များတို့အား ဦးဝိစာရလမ်းနှင့် ဇော်ဂျီလမ်းထောင့်၊ ဦးဖိုးကျားလမ်း နှင့် ဇော်ဂျီ (၅) လမ်းထိပ်တွင်၎င်း၊ ၄၂ ရပ်ကွက်(တိုးချဲ့)၌ ချမ်းမြေ့သာယာ (၁) လမ်းထိပ်နှင့် ဇော်ဂျီလမ်းတို တို့တွင်၎င်း စုစုပေါင်း အမှိုက်ပုံး (၁၅) ပုံး (သုံးမျိုးတစ်စုံ) ၅ - စုံ တို့အား စနစ်တကျ စီစဉ်ထားရှိခဲ့ ပါသည်။
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ အမှတ် (၂) မူလတန်း ကျောင်းနှင့် အမှတ် (၄) အ.ထ.က ကျောင်းများသို့လည်း သွားရောက်၍ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ခြင်ဆေးဖြန်းခြင်းနှင့် သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ တာ ဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး အမှိုက်ပုံများရှိ စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား နာရေးကူညီမှုအ သင်း(ရန်ကုန်) နှင့်အတူ တစ်ရက်ခြားစီ အလှည့်ကျအဖြစ် သိမ်းဆည်း ဆောင်ရွက်သွား ကြမည်ဖြစ်သည်။ အမှိုက်သိမ်းဆည်းရန် သတ်မှတ်ရက်များတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အမှိုက်များ အား ကိုယ်တိုင်လှည်းကျင်းခြင်း၊ ရေမြောင်း များမှ ဆယ်ယူခြင်းနှင့် ပြန့်ကျဲ အမှိုက်များအား သိမ်းဆည်းမှုများ ပြုလုပ်တော့မည် မ ဟုတ်ပေ။ ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူလူထုတို့မှ သတ်မှတ် အမှိုက်ပုံးများသို့ စနစ်တကျ စွန့်ပစ် ထားရှိသည့် အမှိုက်များကိုသာ သိမ်းဆည်းခြင်းအား ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင် သွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
5/27/2014 08:28:00 PM Myanmar-news
အမြန်လမ်းတွင် ရာဇာမင်း ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု လူထိခိုက်သေမှု အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်
5/17/2014 08:00:00 PM accident
ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် ငါးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ယာဉ်မတော်တဆမှု ခုနစ်ရာကျော်တွင် လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရာဇာမင်း ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုမှာ လူထိခိုက်သေမှု အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း အမြန်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရှိရသည်။
ရန်ကုန်-နေပြည်တော်လမ်း စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ငါးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှုပေါင်း ၇၃၀ ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ သေဆုံးသူပေါင်း ၃၆၇ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့ကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
မေလ ၁၂ ရက်နေ့ ည ၆ နာရီက နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်သို့ လူ ၄၄ ဦး တင်ဆောင်လာသည့် ရာဇာမင်းခရီးသည် တင်ယာဉ်သည် မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၉၇ အရောက်တွင် လမ်းဘေးချော်ထွက်ကာ တံတားပေါ်မှ ပြုတ်ကျခဲ့သဖြင့် လူ ၁၃ ဦး ယင်းနေရာတွင် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံး၍ တစ်ဦးမှာ ဆေးရုံတွင် သေဆုံးခဲ့ပြီး ကျန် လူ ၃၀ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရာဇာမင်းယာဉ်ကို မောင်းနှင်ခဲ့သည့် ယာဉ်မောင်း ဦးမင်းခန့် (ခေါ်) ထွန်းခန့်စိုးသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တော် တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်အတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သုံးနှစ် ပိတ်သိမ်းခံထားရပြီး လိုင်စင်ပိတ် ခံထားရသည့် ကာလတွင် ရာဇာမင်းယာဉ်ကို မောင်းနှင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးမှ သိရှိရသည်။
ယင်းဖြစ်ပွားမှုတွင် မဆင်မခြင် မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် ခရီးသည်များ လုံခြုံစွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ရန် အားနည်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-ရန်ကုန် ခရီးစဉ် ပြေးဆွဲခွင့်ကို မေလ ၁၅ ရက်နေ့မှ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း နေပြည်တော် ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
နေပြည်တော်အထွက် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှအထွက် အမြန်လမ်းပေါ် ရောက်ချိန်တွင် ယာဉ်ယိမ်းယိုင်နေမှုကို သတိထားမိခဲ့ကြောင်း ယင်းယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသည့် အစိုးရဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“မြန်လည်း မြန်တယ်။ ထိန်းမရဘူး ဆိုတာကို သိသာတယ်” ဟု ၎င်းးကဆိုသည်။
သေဆုံးသွားသည့် ခရီးသည်များသည် အထူးခရီးသွား အာမခံ ဝယ်ယူထားသူများ ဖြစ်သဖြင့် အာမခံလျော်ကြေး ကျပ်သိန်း ၃၀၊ အလုံးစုံ မော်တော်ယာဉ် အာမခံကြေး ၁၀ သိန်း၊ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှု အာမခံ ကျပ်ငါးသိန်းစုစုပေါင်း တစ်ဦးစီအတွက် ကျပ် ၄၅ သိန်းစီကို မိသားစုများအား ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနက မေလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ရာဇာမင်းယာဉ် တိမ်းမှောက်မှုသည် ယာဉ်မတော်ဆမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် အမြန်လမ်းတွင် အကျွတ်အလွတ်ပွဲ ကျင်းပပြီး တစ်ရက်ခန့် အကြာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယင်းမတိုင်မီ အမြန်လမ်း ၁၁၆ မိုင်တွင် ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့ ည ၂ နာရီကျော်က တောင်ပြာတန်း အဝေးပြေးယာဉ်နှင့် မတ်တူးယာဉ် တိုက်မိပြီး မီးလောင်ကျွမ်းကာ လူ ၁၃ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် အမြန်သေ လမ်းမကြီးဟု ဝေဖန်မှုများ ဟိုးလေးတကျော် ထွက်ပေါ်နေချိန် နေပြည်တော်၌ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၌ မေလ ၁၅ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးတင့်တို့က ၃၃၆ မိုင် သုံးဖာလုံ ရှည်လားသည့် ယင်းအမြန်လမ်းသည် တစ်မိုင်လျှင် ကျပ် သန်း ၂၅၀၀ အကုန်အကျခံ၍ ဖောက်လုပ် ထားသော်လည်း အမြန်လမ်း၏ စံချိန်စံနှုန်း မမီသော ကွန်ကရစ်လမ်းသာ ဖြစ်နေသေးကြောင်း ဝန်ခံပြောဆိုကြသည်။
အမြန်လမ်း လေးလမ်းသွားကို စံချိန်စံညွှန်းမီ ရှစ်လမ်းသွားအဖြစ် ပြုလုပ်ပါက ကျပ် ဘီလီယံ ၅၅၀ ခန့် ထပ်မံကုန်ကျမည် ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် အစိုးရ၏ နည်းပညာ အကူအညီဖြင့် ပြုပြင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသော အမြန်လမ်းကို လမ်းတစ်ခြမ်းလျှင် ယာဉ်လေးစီး မောင်းနှင်နိုင်သည့် ရှစ်လမ်းသွားအဖြစ် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးစိုးတင့်က ပြောကြားသည်။
“ရှစ်လမ်းသွားချဲ့ဖို့ထက် ရှိပြီးသားလမ်းကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်း အရည်အသွေးမီ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက ဟိုင်းဝေးလမ်းတွေလည်း ရှစ်လမ်းသွား မဟုတ်ပါဘူး။ လေးလမ်းကိုပဲ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ မြန်အောင် မောင်းနိုင်အောင် ဖောက်ထားတယ်။ တရုတ်နဲ့ ယိုးဒယားက လမ်းတွေမှာ တောင်အကွေ့တွေကို အရှိန်ချပြီး ကွေ့စရာ မလိုအောင် ဖောက်ထားတယ်၊ တံတား အတက်အဆင်းတွေမှာ ကားမခုန်ဘူး” ဟု ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ဝေဖန်ပြောကြားသည်။
သို့သော်လည်း အမြန်လမ်း ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် ငါးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ယာဉ်မတော်တဆမှု များတွင် ယာဉ်မောင်း ပေါ့ဆမှုကြောင့် ၆၃ ဒသမ ၆၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ယာဉ်ကြောင့် ၂၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရာသီဥတုကြောင့် ၀ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပြီး လမ်းအရည်အသွေးကြောင့် ၁ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းသာ မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အမြန်လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အခြေအနေများ လျော့ကျရန် အချက်ပြမီး ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရောင်ပြန်များ တပ်ဆင်ခြင်း၊ လမ်းအချက်ပြ သင်္ကေတနှင့် မိုင်နှုန်းတိုင်း ကိရိယာ တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ဆောင်ပြီးစီးမှု အခြေအနေမှာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ရှိသေးကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
5/16/2014 08:41:00 PM knowledge
"နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းမီအမြန်လမ်းမကြီးဆိုသည်မှာ" နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းဆိုတာကတော့ စာမျက်နှာ ၅၀၀လောက်ရှိပြီးအားလုံးကလည်း Engineer terms တွေဖြစ်လို့ Facebook မှာရှင်းပြဖို့မလွယ်ပါ။
အဓိကအချက်ကတော့ အမြန်လမ်းမကြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းမှီဖို့က "Fully Access Control" ဖြစ်ရပါမယ်။ Fully Access Control ဖြစ်ဖို့ အဓိကအချက် (၃)ချက် ပြည့်စုံရပါမယ်
1. Fast (မြန်မြန်မောင်းနိုင်ရမယ်)
2. Comfortable (သက်တောင့်သက်သာရှိရမယ်)
3. Safety (လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိရမယ်) ဒီ (၃) ချက်နှင့်ပြည့်စုံရင်တော့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီအမြန်လမ်း(ပူးတွဲပုံ-၁) လို့ခေါ်နိုင်ပါပြီ။ ဒါကိုပြန်ရှင်းရအောင်ဆိုရင် ……
1. Fast(မြန်မြန်မောင်းနိုင်မှု) မြန်မြန်မောင်းနိုင်ဘို့ဆိုရင် ဒီလမ်းတစ်လျှောက် အတားအဆီးလုံးဝမရှိရဘူး။ မီးပွိုင့်တွေ၊ လမ်းဆုံ၊လမ်းခွတွေ၊ အ၀ိုင်းတွေ မရှိရဘူး ၊လမ်းဘေးမှာလူနေအိမ်တွေ၊ ရုံးတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ ၊ စတိုးဆိုင်တွေမရှိရပါဘူး။ လက်ရှိရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းကမီးပွိုင့်တွေ၊ လမ်းဆုံလမ်းခွတွေမရှိပါဘူး။ ဖြတ်သွားတဲ့လမ်းအားလုံးUnder Pass ကနေ ဖြတ်သွားပါတယ်။
လမ်းဘေးမှာလူနေအိမ်၊ ရုံး၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီခေါင်းစဉ်ကလက်ရှိ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းအတွက် စံချိန်စံညွှန်းမှီတယ်လို့ ပြောရင်ရပါတယ်။
2. Comfortable (သက်တောင့်သက်သာရှိမှု) ယာဉ်မောင်းနှင့်ခရီးသည်များသက်တောင့်သက်သာရှိဖို့ Flexible Pavement ဖြစ်ရပါမယ်။ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးများ၊ လမ်းသတိပေးအမှတ်အသားဆိုင်းဘုတ်များ (Road Furniture) ပြည့်စုံရပါမယ်။ (၁)နာရီလျှင် (၁)ကြိမ် ရပ်နား၍ရမည့် Rest Camp များရှိရမည် ဖြစ်ပြီးစားသောက်ဆိုင်များ Toilet များ၊ လေထိုးကျွတ်ဖာကားWorkshopများ၊ ဓါတ်ဆီဆိုင်များအပြည့်အစုံပါရှိရပါမည်။ (လမ်းဘေးဆိုင်များမဟုတ်ရပါ ။ Group of the Restaurants , Rest room, Fuel station and workshop ဖြစ်ရပါမည်) လက်ရှိ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမှာ Master Plan အရ Rest Camp (၁၀)နေရာဖွင့်ဖို့ရှိပေမယ့် အခုက(၄)နေရာဘဲဖွင့်နိုင်သေးပါတယ်။
(၃)နေရာကဖွင့်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီးကျန်(၃)နေရာကတော့ မြေနေရာအတွက် လယ်သမားတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းနေဆဲအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်။ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေ တပ်ထားပေမယ့် Gantry မလုပ်နိုင်သေးဘူး၊ လမ်းက Flexible Pavement (A.C) မခင်းနိုင်သေးဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီအပိုင်းကတော့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မမှီသေးပါဘူး။ 3. Safety (လုံခြုံစိတ်ချရမှု) ယာဉ်မောင်းရော၊ ခရီးသည်တွေရောလုံခြုံစိတ်ချရမှု ရှိရပါမယ် ။ ဒီ့အတွက် ဒီလမ်းဟာယာဉ်စီးရေနှင့်မျှတတဲ့ Road Lanesရှိရပါမယ်။ လမ်းဘေးမှာ Concrete Barriersများ၊ Guardrails များအပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားပြီးဒီလမ်းပေါ်ကိုလူ၊ကျွဲ၊နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီတွေ ဖြတ်သွားလို့မရအောင် ခြံစည်းရိုးခတ်ထားရမယ်။ Highway Polices တွေရှိရမယ် ။ အများသုံးတယ်လီဖုန်းတွေ သုံးလို့ရရမယ်။
CCTV Camera တပ်ထားပြီး Control Station ကနေ Monitorလုပ်နေရမယ်။ ဒီအပိုင်းကတော့ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမှာ Highway Police (၁)ခုဘဲ နိုင်ငံတကာစံချိန်မှီရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ barrier တွေ Guardrails တွေ Fencing တွေ CCTV Camera တွေ မရှိသေးဘူး။ အဆင့်မမှီသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အများကြီးလုပ်ရအုံးမယ်။ Road Safety နှင့် ပတ်သက်လို့ 5.E, 7.S and 5key bodies တို့ရှိပြီးနောင်တွင် အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်။ ဒီ Fast, Comfortable, Safety ၃ ချက်ကိုမပြည့်စုံရင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီအမြန်လမ်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းရဲ့ Master Plan က ပူးတွဲပုံ (၂)ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းရဲ့ Rest Camp နှင့် Police Station များရဲ့ Master Plan က ပူးတွဲပုံ (၃)ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Master Plan အတိုင်းဖြစ်အောင်လို့ US Aid, JICA, KOICA, China Eximbankတို့ကကူညီမှာ ဖြစ်သလို၊ မိမိနိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေနဲ့လည်းရနိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်သွားမှာပါ ။
[ MLIT နဲ့ US Aid က Pre F.S လုပ်ပေးထားတဲ့ dataတွေကိုဆက်လက် ဖော်ပြပေးပါ့မယ်
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ လမ်းဘေးတွင် အဟာရပြတ်၍လဲကျနေသော အဖိုးအိုတဦးကို သွေးမေတ္တာ ပရဟိတအသင်း ကယ်တင်
5/16/2014 10:50:00 AM Myanmar-news
ယနေ့( ၁၅.၊၅၊၂၀၁၄)ညနေ ၄း၀၀နာရီအချိန်တွင်သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ဇ/တောင်ရပ်ကွက် လေးထောင့်ကန်လမ်းမဘေးတွင်အဟာရပြတ်၍လဲကျနေသော
အမြန်လမ်းမကြီးသည် အမြန်လမ်းအဆင့်ထိ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ မပြီးသေးဟု လမ်းအင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးပြော
5/15/2014 07:32:00 PM Myanmar-news
အမြန်လမ်းမကြီးသည် အမြန်လမ်းအဆင့်အထိ မတည်ဆောက်ရသေးသောကြောင့် ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာမောင်းနှင်မှသာ အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမြန်လမ်းဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးဦးကြည်ဇော်မြင့်ကပြောသည်။
‘‘ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးက အမြန်လမ်းအဆင့်ထိ မတည်ဆောက်ရသေးတာ ကြောင့် အပြည့်အ၀ထိန်းချုပ်လို့ မရသေးပါဘူး။ အမြန်မောင်းလို့ရအောင် ခြံစည်းရိုးကာတာတွေ၊ သတိပေး Flash Light လေးတွေ အဲဒါတွေ အကုန်လုံး ပြီးပြည့်စုံအောင်မတပ်ဆင်ရသေးဘူး။ အကြံပြုချက်အတိုင်းသာ ကားကိုမောင်းပါ။ အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးက အရမ်းနည်းပါတယ်’’ ဟု ၎င်းက နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အင်တာဗျူးတွင်ဖြေကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် USAID အဖွဲ့မှ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဒီဇိုင်းလုပ်နည်းကို သင်ကြားပေးရန် ဆွေးနွေးလျက်ရှိပြီး အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်aဖ်ာနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
‘‘US AID က ကျွန်တော်တို့ဆီကို လာဆွေးနွေးပါတယ်။ ၁၀ ကီလိုမီတာကို လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဒီဇိုင်း သင်ပေးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေ ဒီဇိုင်းထုတ်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်တိုင်သူတို့ပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ပါဆိုပြီး Training Project လေးတစ်ခုကို လာကမ်းလှမ်းပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စလည်း ဆွေးနွေးနေတယ်။ အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဆောက်ရွက်နေတယ်’’ ဟု ပြော သည်။
အမြန်လမ်းစဖွင့်ချိန်မှ ယနေ့အထိ သေဆုံးသူ ၃၆၀ကျော်ရှိနေ ပြီဖြစ်ပြီး လမ်းနှင့်ယာဉ်မောင်း များအပေါ် ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများ ရှိနေချိန်ဖြစ်သည်။
‘‘တကယ်လို့ မပြီးသေးဘူးဆိုရင်လည်း အကုန်ပြီးမှဖွင့်ပေါ့။ သူတို့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို ယာဉ်မောင်းတွေသိအောင်သေချာရှင်းပြရဲ့လား။ ဒါဟာတစ်နည်းအားဖြင့် လမ်းကြောင့် ခုလို ဖြစ်တာလို့ ၀န်ခံလိုက်တာပါပဲ’’ဟု အဝေးပြေးယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက ဝေဖန်ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန် လမ်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းပြီး ယခင် လမ်းဟောင်းထက် ခရီးမိုင် ခြောက်ဆယ်ကျော် ပို၍နီးခြင်း၊ သတ်မှတ်ယာဉ်များသာသွားလာခွင့်ပြုခြင်း ၊ မြို့ရှောင်လမ်းဖြစ်ခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် သွားလာသည့် ယာဉ်အစီးရေများလာကာ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှုများလာခဲ့သလို ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုများ ပို၍ မြင့်တက်လာကြောင်း အမြန်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမှူးကြီး နေ၀င်းက ပြောကြားသည်။
ယာဉ်မတော်တဆမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲမှူးကြီးနေ၀င်းက ယာဉ်မတော်တဆမှုများ ပို၍မြင့်တက်လာခြင်း သည် လမ်းချို့ယွင်းမှုထက် ယာဉ်မောင်းများကြောင့် ပို၍ များလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းကို မူလစီမံကိန်းမှာ ရှစ်လမ်းသွားဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဘက်ဂျက် အခြေအနေကြောင့် လေးလမ်းသွားသာလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဖောက်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါလမ်းကို ရှစ်လမ်းသွား တိုးချဲ့နိုင်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့(USAID) မှ ဒေါ်လာ တစ်သန်းခွဲနည်းပညာအကူအညီများ ပေးနေကြောင်း ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးဦးဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်လင်းက ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၃အတွင်း ပြောကြားထားသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းသည် ရန်ကုန်မှ ၈၃ မိုင်အကွာအထိ ဆည်များကိုရှောင်၍ ဖောက်လုပ်ထားရသဖြင့် အကွေ့ အကောက်များနေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးကျော်လင်းကပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းကို ခြောက်နှစ်နှင့်နှစ်လကြာ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်အစိုးရလက်ထက်က လမ်းများဖောက်လုပ်ရာ၌ ရရှိထားသော ဘတ်ဂျက်ဖြင့် လမ်းပေါ်သွားလာနေသူများ ဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံရေးထက် လမ်းရှည်ရေးနှင့်အချိန်မီပြီး စီးရေးကိုသာ ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရကြောင်း ဦးကျော်လင်းကပြောကြားဖူးသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း အမြန်နှုန်းတိုင်းတာရေး စက်များ ထပ်တပ်မည်
5/05/2014 07:33:00 PM Myanmar-news
ဓာတ်ပုံ – ထွန်းထွန်းသိန်း
ယာဉ်တိမ်းမောက်မူတွေ မကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရန်ကုန်- မန္တလေး အမြန်လမ်းမပေါ်မှာ သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းထက် ပိုမိုမောင်းနှင်တဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေကို အရေးယူဖို့အတွက် အမြန်နှုန်း တိုင်းတာရေးစက်တွေကို ထပ်မံ တပ်ဆင်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ရန်ကုန်- မန္တလေး အမြန်လမ်းမရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တဦး ကတော့ လတ်တလောမှာ အမြန်နှုန်း တိုင်းတာရေး စက်အလုံး ၂၀ တပ်ဆင်ဖို့ရှိနေပြီး ထပ်မံတပ်ဆင်ဖို့လည်း ရှိနေတယ်လို့ ဒီဗွီဘီကိုပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမ မှာ မော်တော်ယာဉ်တွေကို ၁ နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ နှုန်းနဲ့ မောင်းနှင်ခွင့်ပြုထားပေမယ့် အချို့ယာဉ်တွေက ပိုမို မောင်းနှင်ကြတဲ့အတွက် မကြာခဏဆိုသလို ယာဉ်တိမ်းမောက်မူတွေဖြစ်ပွားပြီး လူသေဆုံးမူတွေ ရှိနေပါတယ်။
သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုမောင်းနှင်တဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေကို ယာဉ်အမြန်နှုန်း တိုင်းတာရေး စက်တွေနဲ့ စောင့်ကြည့်အရေးယူနေပေမယ့် ယဉ်ထိခိုက်မူတွေတော့ ရှိနေဆဲပါ။
အမြန်နှုန်း တိုင်းတာရေးစက်တွေကို မိုင်တိုင် ၁၁/၂ မှ စတင်ကာ မိုင်တိုင် ၃၅၂/၇ အ ကြား မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး စစ်ဆေးအရေးယူနေတယ်လို့လည်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မူတွေက လမ်းရဲ့စံချိန်စံညွှန်း မမီတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို၊ တခြား အရာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လာမယ့်မေလ ၁၀ ရက်နေ့ မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၁၆ အနီးမှာ အကျွတ်အလွတ် ဒါနပွဲပြူလုပ်မယ့်အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်ကျော်နိုင်က ပြောပါတယ်။
အမြန်လမ်းမတလျှောက်ရဲ့ ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အားနည်းချက်တွေရှိနိုင်ပြီး ၆ ရာခိုင်နှုန်းက အသေးစိတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေတယ်လို့ အမြန်လမ်းမ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အကူအညီတွေပေးဖို့ လေ့လာခဲ့တဲ့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတခု ဒီနှစ်ဆန်းမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အမြန်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးရဲ့ စာရင်းတွေအရတော့ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ယာဉ်တိုက်မှုပေါင်း ၉၅ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ၁၁၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့အထိ ယာဉ်မတော်တဆမှု ၁၄၇ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၅၇ ဦး သေဆုံးကာ ၂၆၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။
4/25/2014 12:39:00 PM business-news
မြန်မာ့မီးရထားမှ မီးရထားတွင် အသုံးပြုရသည့် ပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်းမြင့် တက် လာသောကြောင့် အရှုံးပေါ်သော အခြေအနေ ရောက်ရှိနေသဖြင့် ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်ရထားအား ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်းရန် ဧပြီလ လဆန်းပိုင်းမှ စတင်၍ တင်ဒါခေါ်ယူလျက် ရှိသည်ဟု ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် မြန်မာ့မီးရထား တိုင်းအမှတ်(၂)မှ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးဇော်ဖေစိန်က မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
မြန်မာ့မီးရထား အရှုံးပေါ်နေခြင်းမှာ ၀န်ထမ်းများ လစာတိုးပေးရခြင်းအပြင် မီးရထားပစ္စည်း များ ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်ခြင်း၊ ရထားလမ်းတွင် အသုံးပြုရ သည့် ကျောက်၊ သံလမ်း၊ ဇလီဖားတုံး ၏ ဈေးနှုန်းများ တိုးလာခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်။
““အရှုံးအမြတ်က ဆီဖိုးတောင် မရဘူး။ အရင်က လက်မှတ်က ဆီတစ်ဂါလန်ကို ၁၀၀ ကျပ်နှုန်း တွက် ထားတာလေ။ အခုက ဆီတစ်ဂါလန်မှာ ၃၅၀၀ ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ ဆီဖိုးတောင် မကွဲဘူးပေါ့။ နိုင်ငံတော်က စိုက်ထုတ်သုံးစွဲပြီး လုပ်ရတာပေါ့။ ရထားခကို မြှင့်တက်လိုက်တဲ့ အခါမှာလည်း မမြတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မီးရထားက ပြည်သူတွေရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးတဲ့ဌာနဆိုတော့ ရုန်းကန်ပြီးတော့ လုပ်ရတာပေါ့နော်””ဟု အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးဇော်ဖေစိန်က မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။ မည်မျှအထိ အရှုံးပေါ်နေ သည်ကိုမူ ပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်း အသုံးပြုခွင့်ပေးမည့် ရထားနှစ်စီးမှာ အမှတ် (၅) အဆန်နှင့် အမှတ်(၆) အစုန်ရထားတို့ ဖြစ်ပြီး တင်ဒါအောင်မည် ဆိုပါက သုံးနှစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရမည် ဖြစ်သည်။ လုပ်ကိုင်လိုသူ အနေဖြင့် နိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်ဟု ကန့်သတ်ထားပြီး တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် စာချုပ်ချုပ်ဆို လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ တင်ဒါ လျှောက်ထားသူများ အနေဖြင့် မြန်မာ့မီးရထား လုပ်ငန်းသို့ ကြိုတင်ငွေအဖြစ် ကျပ်သိန်း ၄၀ ကနဦး ပေးသွင်း ရမည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါ မအောင်သူများ အနေဖြင့် ပြန်လည် ထုတ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်နေစဉ် အတွင်း ရထားပြေးဆွဲရန်အတွက် တင်ဒါအောင်သူနှင့် မြန်မာ့မီးရထားတို့မှ သီးခြားစီ တာဝန်ခွဲယူ လုပ်ကိုင် ကြရမည်ဖြစ်သည်။
““လောလောဆယ်တော့ ရန်ကုန်-မန္တလေးကိုပဲ ငှားမှာပေါ့။ လက်မှတ်ခ ဘယ်လောက်ပဲ ပေးရမယ်။ ၀န်ဆောင်မှု ဘယ်လောက်ပဲ ပေးရမယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ အားလုံးပေါင်းပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ သူ့ဟာသူ တွက်မှာပေါ့။ တွက်ပြီးတော့မှ မီးရထားကို ဘယ်လောက် ပေးမယ်ပေါ့ အဲလိုပါ””ဟု ဦးဇော်ဖေစိန်က မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
လက်ရှိ ပြေးဆွဲလျက်ရှိသော ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်ရထားမှာ အမှတ်(၅)အဆန်၊ အမှတ်(၆)အစုန်၊ အမှတ်(၃) အဆန်၊ အမှတ် (၄)အစုန်၊ အမှတ်(၁၁)အဆန်၊ အမှတ် (၁၂)အစုန် စုစုပေါင်း ၆စီးဖြင့် ပြေးဆွဲပြီး စာပို့ရထားမှာ အမှတ် (၁) အဆန်နှင့် အမှတ်(၂)အစုန်သာရှိသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် အမှတ်(၅)အဆန်နှင့် အမှတ် (၆) အစုန်ကို ပထမဦးစွာ ငှားရမ်းပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်-မြစ်ကြီးနား မီးရထားလုပ်ငန်းကိုလည်း ပုဂ္ဂလိကသို့ ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ အမြန်ရထား လက်မှတ်မှာ ရိုးရိုးတန်း ၄၆၅၀ ကျပ်၊ အထက်တန်း ၉၃၀၀ ကျပ်နှင့် အိပ်စင် ၁၂၇၂၀ ကျပ်သာဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင် ငှားရမ်းစဉ်အတွင်း ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများ အနည်းငယ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။